November 2017 - ဗေဒင်ဝါသနာအိုး
30.11.2017 မှ 06.12.2017 အထိ တစ်ပတ်စာ ၇ရက်သားသမီး ဟောစာတမ်း
30.11.2017 မှ 06.12.2017 အထိ
တစ်ပတ်စာ ၇ရက်သားသမီး ဟောစာတမ်း
ဒီကာလဟာ အလုပ်သစ်လျှောက်ခြင်း၊ အလုပ်ရှာဖွေခြင်း၊ ဆိုင်ဖွင့်ခြင်း ၊အလုပ်သစ်ရှာဖွေခြင်းတွေအထူးကောင်းပါတယ်။ အထက်လူကြီး /အကြီးအကဲမိဘတွေရဲ့ ကူညီ ထောက်ပံ့ခြင်းတွေလဲရလာတတ်ပါတယ်။ အလုပ်စီးပွားလဲ အဘက်ဘက်ကနေပြီးကောင်းလာတတ်ပါတယ်။ မိသားစုအတွင်းရေးနဲ့ ပက်သက်ပြီးတော့ အပူတွေ့ရတတ်ပါတယ်။ ညီအကို မောင်နှမတွေနဲ့ မတည့်တာ စကားများရတာတွေလဲကြုံရပါလိမ့်မယ်။ အရပ်ဝေး ခရီးတွေလဲ သွားရတတ်ပါတယ်။ အချစ်ရေးကံကတော့ အညံ့ဘက်များပါတယ်။ အချစ်ရေးကံခေနေတတ်တဲ့ကာလပါပဲ။ ပညာရေးကံကြမ္မာ အကောင်းဆုံးအချိန်ပါပဲဗျ။ ကျန်းမာရေးကတော့ အနည်းငယ်ဂရုစိုက်ဖို့ လိုအပ်ပါတယ်ဗျာ။
ယတြာ အာလူးဟင်းနဲ့ ဘုရားရှင်အား ဆွမ်းကပ်ပါ။
ဒီကာလအတွင်း ပြုဖွယ်ရာကိစ္စတွေအရမ်းများနေတတ်ပါတယ်။ မိမိအကျိုးထက် သူများအကျိုးစီးပွားများ လုပ်ဆောင်ပေးနေရတတ်တယ်။ လူမှုရေးကိစ္စများမှာလဲ ဦးဆောင်ဦးရွက်လုပ်ပေးနေရတတ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့်ပဲ ငွေကုန်ကြေးကျလဲ များနေရတတ်ပါတယ်။ သူများပိုက်ဆံလာအပ်ရင် လက်မခံထားပါနဲ့ ။ မိမိလက်ထဲကျမှ ပျောက်ရှတတ်လို့ပါ။
အချစ်ရေးနဲ့ပက်သက်ပြီးတော့ ချစ်သူနဲ့ ခွဲခွာနေရတတ်ပါတယ်။ ချစ်သူကို အဝေးကနေ လွမ်းဆွတ်နေရလိမ့်မယ်။ အလုပ်ထဲမှာ အများနဲ့ စုပေါင်းလုပ်ကိုင်ရတဲ့ကိစ္စတွေမှာ အခက်အခဲများစေပါတယ်။ ညှိနှိုင်းရခက်ခဲမဲ့ သဘောတွေရှိပါတယ်။ ကျန်းမာရေးကတော့ နည်းနည်းနုနေတဲ့ကာလပါ။ အတိမ်းအစောင်းအခံဘူးပေါ့လေ။ ပညာရေးကတော့ အကောင်းအဆိုးမျှနေပါတယ်ဗျ။
ယတြာ အိမ်က ဘုရားဆောင်အား သန့်ရှင်းရေးလုပ်ပါ
ဒီကာလအတွင်း ဘာကိစ္စမဆို ဖြေးဖြေးမှန်မှန်လုပ်ပါ။မလောပါနဲ့ ။ ကား၊ဆိုင်ကယ်မောင်းတာကအစ
အရင်ထက် အရှိန်လျော့မောင်းပါ။ အန္တရာယ်ရှိသော လုပ်ငန်းခွင်မှာ လုပ်ကိုင်နေရသူများ PPE ပြည့်စုံစွာ ဝတ်ဆင်ထားတာပိုကောင်းပါတယ်။ ခေါင်းအေးအေးထား ပြီး လုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်မှုတွေတိုင်းက ကောင်းသောအကျိုးဆက်တွေ ရလာမှာပါ။
ရစရာရှိတဲ့ ငွေကြေးတွေ အပြည့်မရဘဲ တစ်ချို့ တစ်ဝက်ပဲရတတ်ပါတယ်။ ကိုယ့်အားကိုယ်ကိုး လုပ်ကိုင်ရမဲ့ အချိန်ပါ။ မိတ်ဆွေအပေါင်းအသင်းတွေရဲ့ အကူအညီရခဲတယ်။ ကျန်းမာရေးကတော့ စိတ်ပူစရာ သိပ်မရှိပါဘူး။ ဝမ်းချုပ်၊လေချုပ် ဖြစ်လွယ်တဲ့ကာလအပိုင်းအခြားပါပဲ။ ပညာရေးကံအကောင်းဆုံးအချိန်ပါ။
ယတြာ ကြက်သားဟင်းအကျန်နဲ့ ထမင်းနယ်ပြီးလမ်းဘေးခွေးတွေကို ချကျွေးလိုက်ပါ။
ကံအထူးမြင့်မားနေပါလိမ့်မယ်။ ပျော်စရာ စိတ်ချမ်းမြေ့စရာတွေ ဆက်တိုက်ကြုံရနိုင်တဲ့ကာလပါ။
ရွှေငွေ လက်ဝတ်ရတနာတွေလဲ ဝင်လာတတ်ပါတယ်။ ရပ်ဝေးကနေ လက်ဆောင်တွေလဲ ရလာနိုင်ပါတယ်။ ကိုယ့်ရဲ့မွေးနေ့ ၊အထိမ်းအမှတ်နေ့တွေကိုလဲ သတိတရကျင်းပပေးတာမျိုးကြုံရတတ်ပါတယ်။ငွေကြေးလာဘ်လာဘတွေ ဝင်လာပါလိမ့်မယ်။
ဆုံးမယ်လို့ ထင်ထားတဲ့ငွေကြေးတွေလဲ ပြန်လည်ရရှိလာတတ်တယ်။ ရပ်ဝေးကဆွေမျိုးတွေ လာလည်တာမျိုးလဲကြုံတွေ့ရပါလိမ့်မယ်။ ဝန်ထမ်းထက် ကိုယ်ပိုင်စီးပွားရေးသမားများ ပိုအကျိုးဖြစ်ထွန်းမှာပါ။
အချစ်ရေးကတော့ မျှော်လင့်ထားသလို မဖြစ်သေးပါဘူး။ ကျန်းမာရေးကတော့ အနည်းငယ်ညံ့နေတာတွေ့ရတယ်။ ပညာရေးအထူးကောင်းပေမဲ့ကြိုးစားဖို့တော့ လိုတာပေါ့ဗျာ
ယတြာ လိမ္မော်သီး ဘုရားကပ်လှူပါ
ဒီကာလဟာ မိတ်ဆွေအပေါင်းအသင်းတွေနဲ့ ပျော်ပျော်ပါးပါးဖြတ်ကျော်ရမဲ့ ကာလပါပဲ။ ငွေကံကလဲအထူးကောင်းနေပါတယ်။ အလုပ်ထဲမှာလဲ ပျော်ပျော်ပါးပါးတွေနဲ့ ဖြတ်သန်းရပါလိမ့်မယ်။ အလုပ်ကံကောင်းနေသလို အထက်လူကြီးရဲ့ အထောက်အပံ့အကူအညီတွေလဲ ရလာတတ်ပါတယ်။ ပညာထူး အသိထူးတွေလဲ ရလာတတ်ပါတယ်။ စာမေးပွဲဖြေမည့်သူများရှိရင် ထင်ထားသည်ထက်ပိုပြီး ဖြေဆိုနိုင်ပါလိမ့်မယ်။ အမိအဘတွေကို ကောင်းစွာထောက်ပံ့လုပ်ကျွေးနိုင်ပါလိမ့်မယ်။ အချစ်ရေးမှာ ချစ်သူနဲ့
ပျော်စရာအချိန်လေးတွေကို ဖန်တီးနိုင်မှာပါ။ လူပျိုကြီးအပျိုကြီးများ စန်းပွင့်နေလိမ့်မယ်။ ကျန်းမာရေးကတော့ ကောင်းပေမဲ့ ခရီးသွားလိုက်ပြီး ပြန်ရောက်ရင်တော့ ကျန်းမာရေးညံ့သွားတတ်ပါတယ်။
ယတြာ နီးစပ်ရာဘုရားမှာ စိတ်အေးချမ်းသည်အထိ ဘုရားရှစ်ခိုးပရိတ်ပဌာန်းရွတ်နေလိုက်ပါ။
ကံစီမံရာကို လက်ခံရမဲ့ကာလပါ။ မိမိဖြစ်ချင်တာတွေမဖြစ်ဘဲ မဖြစ်ချင်တာတွေပဲ ဖြစ်နေရပါလိမ့်မယ်။ ခရီးသွားဖို့ အစီအစဉ်တွေရှိရင်လဲ အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့်ပျက်သွားတတ်ပါတယ်။ မိမိနေအိမ် မိမိပိုက်ဆံအိတ်လုံခြုံစွာထားပါ။ သူခိုးခိုးခံရတတ်ပါတယ်။ အဖိုးတန်ပစ္စည်းတွေ ပျောက်ရှတတ်လို့ပါပဲ။ အရေးကြီးတဲ့ကိစ္စများ အရေးကြီးတဲ့ ဆုံးဖြတ်ချက်များ ဒီကာလမှာ မချမှတ်သင့်သေးပါဘူး။ ငွေကံမနိမ့်ပေမယ် ငွေကုန်ကြေးကျတော့ များနေတတ်ပါတယ်။ ငွေအထွက်များနေလိမ့်မယ်။ လက်အောက်ငယ်သားများကြောင့် မိမိဂုဏ်တတ်ရပါလိမ့်မယ်။ ကျန်းမာရေးကတော့ အဆိုးထဲကအကောင်းပါပဲ။ စိတ်ပူစရာမလိုပါဘူး။ ချစ်သူနဲ့ စကားအပြောအဆိုမမှားမိပါစေနဲ့ ။ ပညာရေးကြိုးစားနိုင်မှရပါလိမ့်မယ်။
အများနဲ့ တစ်ယောက်ဆိုသလို ဖြစ်ရတတ်ပါတယ်။ မိမိလုပ်ဆောင်ချက်တွေအပေါ် အထင်လွဲပြီး အပြစ်တင်ခံရတတ်ပါတယ်။ နားလည်မှုရဖို့ စကားလုံးတွေနဲ့ တည်ဆောက်ရမဲ့ကာလပါပဲ။ တာဝန်တွေ ဝတ္တရားတွေကို ထမ်းဆောင်ဖို့မိမိစိတ်ထဲစတင်အကောင်အထည်ဖော်မိနေတဲ့ကာလပါပဲ။ အနာဂတ်ရည်မှန်းချက်တွေကို စိတ်ကူးနဲ့ပံဖော်နေမိတတ်ပါတယ်။ လက်ထပ်ဖို့ကိစ္စများ ၊ အလှူမင်္ဂလာကိစ္စများလဲကြုံရတတ်ပါတယ်။ အိမ်ထောင်သည်များအိမ်ထောင်ရေးသာယာမဲ့ အခိုက်အတန့်ပါ။ အလုပ်မှာလဲငွေကြေးကြောင့် လုပ်ကိုင်ပေးတာမျိုးမဟုတ်ဘဲ စေတနာကြောင့် လုပ်ကိုင်ပေးနေမိတတ်ပါတယ်။ ပညာရေးကံက ကောင်းပြီးသားပါ။ကြိုးစားဖို့ပဲလိုပါတယ်။ အချစ်ရေးကံကတော့ စတင်ကောင်းနေပါပြီ။
ယတြာ ဒိန်ချဉ်တစ်ခွက် ဘုရားကပ်လှူပေးပါ။
30.11.2017 မှ 06.12.2017 အထိ
တဈပတျစာ ရရကျသားသမီး ဟောစာတမျး
ဒီကာလဟာ အလုပျသဈလြှောကျခွငျး၊ အလုပျရှာဖှခွေငျး၊ ဆိုငျဖှငျ့ခွငျး ၊အလုပျသဈရှာဖှခွေငျးတှအေထူးကောငျးပါတယျ။ အထကျလူကွီး /အကွီးအကဲမိဘတှရေဲ့ ကူညီ ထောကျပံ့ခွငျးတှလေဲရလာတတျပါတယျ။ အလုပျစီးပှားလဲ အဘကျဘကျကနပွေီးကောငျးလာတတျပါတယျ။ မိသားစုအတှငျးရေးနဲ့ ပကျသကျပွီးတော့ အပူတှရေ့တတျပါတယျ။ ညီအကို မောငျနှမတှနေဲ့ မတညျ့တာ စကားမြားရတာတှလေဲကွုံရပါလိမျ့မယျ။ အရပျဝေး ခရီးတှလေဲ သှားရတတျပါတယျ။ အခဈြရေးကံကတော့ အညံ့ဘကျမြားပါတယျ။ အခဈြရေးကံခနေတေတျတဲ့ကာလပါပဲ။ ပညာရေးကံကွမ်မာ အကောငျးဆုံးအခြိနျပါပဲဗြ။ ကနျြးမာရေးကတော့ အနညျးငယျဂရုစိုကျဖို့ လိုအပျပါတယျဗြာ။
ယတွာ အာလူးဟငျးနဲ့ ဘုရားရှငျအား ဆှမျးကပျပါ။
ဒီကာလအတှငျး ပွုဖှယျရာကိစ်စတှအေရမျးမြားနတေတျပါတယျ။ မိမိအကြိုးထကျ သူမြားအကြိုးစီးပှားမြား လုပျဆောငျပေးနရေတတျတယျ။ လူမှုရေးကိစ်စမြားမှာလဲ ဦးဆောငျဦးရှကျလုပျပေးနရေတတျပါတယျ။ ဒါကွောငျ့ပဲ ငှကေုနျကွေးကလြဲ မြားနရေတတျပါတယျ။ သူမြားပိုကျဆံလာအပျရငျ လကျမခံထားပါနဲ့ ။ မိမိလကျထဲကမြှ ပြောကျရှတတျလို့ပါ။
အခဈြရေးနဲ့ပကျသကျပွီးတော့ ခဈြသူနဲ့ ခှဲခှာနရေတတျပါတယျ။ ခဈြသူကို အဝေးကနေ လှမျးဆှတျနရေလိမျ့မယျ။ အလုပျထဲမှာ အမြားနဲ့ စုပေါငျးလုပျကိုငျရတဲ့ကိစ်စတှမှော အခကျအခဲမြားစပေါတယျ။ ညှိနှိုငျးရခကျခဲမဲ့ သဘောတှရှေိပါတယျ။ ကနျြးမာရေးကတော့ နညျးနညျးနုနတေဲ့ကာလပါ။ အတိမျးအစောငျးအခံဘူးပေါ့လေ။ ပညာရေးကတော့ အကောငျးအဆိုးမြှနပေါတယျဗြ။
ယတွာ အိမျက ဘုရားဆောငျအား သနျ့ရှငျးရေးလုပျပါ
ဒီကာလအတှငျး ဘာကိစ်စမဆို ဖွေးဖွေးမှနျမှနျလုပျပါ။မလောပါနဲ့ ။ ကား၊ဆိုငျကယျမောငျးတာကအစ
အရငျထကျ အရှိနျလြော့မောငျးပါ။ အန်တရာယျရှိသော လုပျငနျးခှငျမှာ လုပျကိုငျနရေသူမြား PPE ပွညျ့စုံစှာ ဝတျဆငျထားတာပိုကောငျးပါတယျ။ ခေါငျးအေးအေးထား ပွီး လုပျကိုငျဆောငျရှကျမှုတှတေိုငျးက ကောငျးသောအကြိုးဆကျတှေ ရလာမှာပါ။
ရစရာရှိတဲ့ ငှကွေေးတှေ အပွညျ့မရဘဲ တဈခြို့ တဈဝကျပဲရတတျပါတယျ။ ကိုယျ့အားကိုယျကိုး လုပျကိုငျရမဲ့ အခြိနျပါ။ မိတျဆှအေပေါငျးအသငျးတှရေဲ့ အကူအညီရခဲတယျ။ ကနျြးမာရေးကတော့ စိတျပူစရာ သိပျမရှိပါဘူး။ ဝမျးခြုပျ၊လခြေုပျ ဖွဈလှယျတဲ့ကာလအပိုငျးအခွားပါပဲ။ ပညာရေးကံအကောငျးဆုံးအခြိနျပါ။
ယတွာ ကွကျသားဟငျးအကနျြနဲ့ ထမငျးနယျပွီးလမျးဘေးခှေးတှကေို ခကြှေးလိုကျပါ။
ကံအထူးမွငျ့မားနပေါလိမျ့မယျ။ ပြျောစရာ စိတျခမျြးမွစေ့ရာတှေ ဆကျတိုကျကွုံရနိုငျတဲ့ကာလပါ။
ရှငှေေ လကျဝတျရတနာတှလေဲ ဝငျလာတတျပါတယျ။ ရပျဝေးကနေ လကျဆောငျတှလေဲ ရလာနိုငျပါတယျ။ ကိုယျ့ရဲ့မှေးနေ့ ၊အထိမျးအမှတျနတှေ့ကေိုလဲ သတိတရကငျြးပပေးတာမြိုးကွုံရတတျပါတယျ။ငှကွေေးလာဘျလာဘတှေ ဝငျလာပါလိမျ့မယျ။
ဆုံးမယျလို့ ထငျထားတဲ့ငှကွေေးတှလေဲ ပွနျလညျရရှိလာတတျတယျ။ ရပျဝေးကဆှမြေိုးတှေ လာလညျတာမြိုးလဲကွုံတှရေ့ပါလိမျ့မယျ။ ဝနျထမျးထကျ ကိုယျပိုငျစီးပှားရေးသမားမြား ပိုအကြိုးဖွဈထှနျးမှာပါ။
အခဈြရေးကတော့ မြှျောလငျ့ထားသလို မဖွဈသေးပါဘူး။ ကနျြးမာရေးကတော့ အနညျးငယျညံ့နတောတှရေ့တယျ။ ပညာရေးအထူးကောငျးပမေဲ့ကွိုးစားဖို့တော့ လိုတာပေါ့ဗြာ
ယတွာ လိမ်မျောသီး ဘုရားကပျလှူပါ
ဒီကာလဟာ မိတျဆှအေပေါငျးအသငျးတှနေဲ့ ပြျောပြျောပါးပါးဖွတျကြျောရမဲ့ ကာလပါပဲ။ ငှကေံကလဲအထူးကောငျးနပေါတယျ။ အလုပျထဲမှာလဲ ပြျောပြျောပါးပါးတှနေဲ့ ဖွတျသနျးရပါလိမျ့မယျ။ အလုပျကံကောငျးနသေလို အထကျလူကွီးရဲ့ အထောကျအပံ့အကူအညီတှလေဲ ရလာတတျပါတယျ။ ပညာထူး အသိထူးတှလေဲ ရလာတတျပါတယျ။ စာမေးပှဲဖွမေညျ့သူမြားရှိရငျ ထငျထားသညျထကျပိုပွီး ဖွဆေိုနိုငျပါလိမျ့မယျ။ အမိအဘတှကေို ကောငျးစှာထောကျပံ့လုပျကြှေးနိုငျပါလိမျ့မယျ။ အခဈြရေးမှာ ခဈြသူနဲ့
ပြျောစရာအခြိနျလေးတှကေို ဖနျတီးနိုငျမှာပါ။ လူပြိုကွီးအပြိုကွီးမြား စနျးပှငျ့နလေိမျ့မယျ။ ကနျြးမာရေးကတော့ ကောငျးပမေဲ့ ခရီးသှားလိုကျပွီး ပွနျရောကျရငျတော့ ကနျြးမာရေးညံ့သှားတတျပါတယျ။
ယတွာ နီးစပျရာဘုရားမှာ စိတျအေးခမျြးသညျအထိ ဘုရားရှဈခိုးပရိတျပဌာနျးရှတျနလေိုကျပါ။
ကံစီမံရာကို လကျခံရမဲ့ကာလပါ။ မိမိဖွဈခငျြတာတှမေဖွဈဘဲ မဖွဈခငျြတာတှပေဲ ဖွဈနရေပါလိမျ့မယျ။ ခရီးသှားဖို့ အစီအစဉျတှရှေိရငျလဲ အကွောငျးအမြိုးမြိုးကွောငျ့ပကျြသှားတတျပါတယျ။ မိမိနအေိမျ မိမိပိုကျဆံအိတျလုံခွုံစှာထားပါ။ သူခိုးခိုးခံရတတျပါတယျ။ အဖိုးတနျပစ်စညျးတှေ ပြောကျရှတတျလို့ပါပဲ။ အရေးကွီးတဲ့ကိစ်စမြား အရေးကွီးတဲ့ ဆုံးဖွတျခကျြမြား ဒီကာလမှာ မခမြှတျသငျ့သေးပါဘူး။ ငှကေံမနိမျ့ပမေယျ ငှကေုနျကွေးကတြော့ မြားနတေတျပါတယျ။ ငှအေထှကျမြားနလေိမျ့မယျ။ လကျအောကျငယျသားမြားကွောငျ့ မိမိဂုဏျတတျရပါလိမျ့မယျ။ ကနျြးမာရေးကတော့ အဆိုးထဲကအကောငျးပါပဲ။ စိတျပူစရာမလိုပါဘူး။ ခဈြသူနဲ့ စကားအပွောအဆိုမမှားမိပါစနေဲ့ ။ ပညာရေးကွိုးစားနိုငျမှရပါလိမျ့မယျ။
အမြားနဲ့ တဈယောကျဆိုသလို ဖွဈရတတျပါတယျ။ မိမိလုပျဆောငျခကျြတှအေပျေါ အထငျလှဲပွီး အပွဈတငျခံရတတျပါတယျ။ နားလညျမှုရဖို့ စကားလုံးတှနေဲ့ တညျဆောကျရမဲ့ကာလပါပဲ။ တာဝနျတှေ ဝတ်တရားတှကေို ထမျးဆောငျဖို့မိမိစိတျထဲစတငျအကောငျအထညျဖျောမိနတေဲ့ကာလပါပဲ။ အနာဂတျရညျမှနျးခကျြတှကေို စိတျကူးနဲ့ပံဖျောနမေိတတျပါတယျ။ လကျထပျဖို့ကိစ်စမြား ၊ အလှူမင်ျဂလာကိစ်စမြားလဲကွုံရတတျပါတယျ။ အိမျထောငျသညျမြားအိမျထောငျရေးသာယာမဲ့ အခိုကျအတနျ့ပါ။ အလုပျမှာလဲငှကွေေးကွောငျ့ လုပျကိုငျပေးတာမြိုးမဟုတျဘဲ စတေနာကွောငျ့ လုပျကိုငျပေးနမေိတတျပါတယျ။ ပညာရေးကံက ကောငျးပွီးသားပါ။ကွိုးစားဖို့ပဲလိုပါတယျ။ အခဈြရေးကံကတော့ စတငျကောငျးနပေါပွီ။
ယတွာ ဒိနျခဉျြတဈခှကျ ဘုရားကပျလှူပေးပါ။
( ဒီဇင်ဘာလ ) ၂၀၁၇ အတွက် ဟောစတမ်း
ယခုလတွင်း အလုပ်အကိုင် ကိစ္စများ အဆင်မပြေပဲ ဖြစ်နေမည်။ ဟိုဟာလုပ်ရမလို ဒီဟာလုပ်ရမလို နဲ့ ဆုံးဖြတ်ရခက်နေမည်။
အလုပ်အကိုင် အတွက်နဲ့ စိတ်တိုင်းမကျ စိတ်ပျော်ရွှင်မရှိပဲ ဖြစ်နေမည်။ အလုပ်ပြောင်းလိုစိတ် နေရာပြောင်း လိုစိတ်များ ဖြစ်ပေါ်နေမည်။
ယခုလတွင်း ငွေကြေးကိစ္စများ အတွက်နဲ့ စိတ်ညစ်နေရမည်။ ငွေကြေးကိစ္စများ အဆင်မပြေသေးပါ။ အဖတ်မတင်သေးပါ။
အထက် လူကြီးတစ်ဦးဦးထံမှ ကူညီမှရရှိမည်။ လူမှုရေးကိစ္စများနှင့် မိသားစု ညီအစ်ကို မောင်နှမ ကိစ္စများတွင် အနည်းငယ် စိတ်ညစ်ရမည်။
ကောင်းသောခရီးတစ်ခုသို့ ထွက်ရမည်။ အင်္ဂါနံကိစ္စများ တနလာင်္နံကိစ္စများ အတွက်နဲ့ အနည်းငယ် စ်ိတ်ညစ်နေရမည်။ပညာရေး ရည်မှန်းချက်များ တိုးတက်လာမည်။
အဆင်ပြေလာမည်။ ဒီလအတွင်း အချစ်ရေးကိစ္စများ ချစ်သူနဲ့ အမြဲစကားများနေရမည်။
ချစ်သူအသစ် ရရှိမည်။ အိမ်ထောင်ရေးမှာ အဆင်ပြေနေသော အချိန်လေးပါ။ ဒီလအတွက် ကျန်းမာရေး ဗိုက်နာဗိုက်အောင့် ဖြစ်မည်။
ယတြာ = ကံကောင်းစေရန် အတွက် မိမိနေအိမ်ဘုရားတွင် သရက်သီး ၃ လုံး လှူဒါန်း၍ ဆုတောင်းလိုက်ပါ။
ဂဏန်း ။ ။ ၇ ၉ ၀ ၁
တနင်္လာ သားသမီးများ အတွက်
ဒီလအတွင်း အလုပ်အကိုင်ကိစ္စများ အဆင်ပြေလာမည်။ အလုပ်အသစ် နေရာအသစ်များစတင်ပြုလုပ်ရမည်။
လုပ်ငန်းများအတွက် အကူညီပေးသူ အကြံညဏ်ပေးသူများ ပေါ်ပေါက်လာမည်။ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ တိုးတက် အောင်မြင်လာမည်။
ယခုလအတွင်း အဖက်ဖက်မှ ကံကောင်းလာသော အချိန်လေး ဖြစ်ပါသည်။ ယခုလအတွင်း ငွေကြေးကိစ္စများ ကုန်ကျမှုများနေမည်။
စက်ပစ္စည်း အသစ်ထပ်ဝင်မည်။ မိသားစုအတွင်း ကောင်းသောပြောင်းလဲခြင်း ကြုံမည်။ အလုပ်အတွင်း သူငယ်ချင်း မိတ်ဆွေတစ်ဦးမှ မိမိအား အထင်လွဲခြင်း ဖြစ်မည်။
ပညာရေး ကံကောင်းနေသော အချိန်လေး ဖြစ်ပါသည်။ ယခုလတွင်း အချစ်ရေးကိစ္စများ အဆင်ပြေနေသော အချိန်လေး ဖြစ်ပါသည်။
အိမ်ထောင်ရေး ကိစ္စများ စိတ်နေသဘောထား မတိုက်ဆိုင်ပဲ ဖြစ်နေမည်။ ယခုလ အတွင်း ကျန်းမာရေးမှာ ခါးနာ ၊ ဒူးနာ ဖြစ်နေမည်။
ယတြာ = ကံကောင်းစေရန်အတွက် တနင်္လာနေ့တွင် ကလေးတစ်ဦးဦးအား ငွေ ၁၅ ကျပ် လှူဒါန်း၍ဆုတောင်းလိုက်ပါ။
ဒီလ အတွက် ကံကောင်း အကျိုးပေးသော
ဂဏန်းများ ။ ။ ၅ ၃ ၁ ၉
အင်္ဂါ သားသမီးများ အတွက်
ယခုလ အတွင်း အလုပ်အကိုင် ကိစ္စများ အဆင်မပြေသေးပါ။ ရတာမလို လိုတာမရနဲ့ ဖြစ်နေမည်။
လုပ်ဆောင်မှုများ အဆင်မပြေပဲ ဖြစ်နေမည်။ လုပ်ငန်းများ လုပ်ကိုင်ရာတွင် ရန်အတိုက် အခံများနှင့် မနာလိုသူများ ရှိနေပါသည်။
ငွေကြေးကိစ္စများ ပုံမှန်လေး အဆင်ပြေလာမည်။ အခက်အခဲတွေ များနေသော်လည်း အကူညီပေးသူများ ပေါ်လာမည်။
ယခုလအတွင်း နေရာထိုင်ခင်းကိစ္စများ ငွေကြေးကိစ္စအတွက်နဲ့ အနည်းငယ် စိတ်ညစ်နေရမည်။ အဝတ်အထည်များ ဝင်မည်။
အမွေကိစ္စများ ဖြစ်ပေါ်လာမည်။ ပညာရေး ဆက်လက် ကောင်းမွန်လာမည်။ ကံကောင်းနေသော အချိန်ဖြစ်ပါသည်။
ဒီလအတွင်း အချစ်ရေးမှာ အဆင်ပြေလာမည်။ ခဏတာ ဝေးနေသော်လည်း ပြန်လည်ဆုံဆည်းလာမည်။
ဒီလအတွင်း အိမ်ထောင်ရေး ကိစ္စများ နေသော အချိန်လေး ဖြစ်ပါသည်။ ဒီလအတွင်း မျက်စိအားနည်းမည်။
ယတြာ = ကံကောင်းစေရန်အတွက် အင်္ဂါနေ့ နံနက်တွင် အသက်ကြီးသူတစ်ဦးအား မိမိနှစ်သက်ရာ သစ်သီး ၅ လုံးကို လှူဒါန်း၍ ဆုတောင်းလိုက်ပါ။
ဂဏန်းများမှာ ။ ။ ၃ ၉ ၇ ၅
ဒီလအတွင်း ဆန္ဒတွေဟာ မပြည့်စုံသေးပါဘူး။ အထက်လူကြီးတွေနဲ့လည်း သိပ်ပြီးအဆင်မပြေသေးပါဘူး။ သွားမတွေ့ သင့်ပါ။
ဒီလအတွင်းမှာ စိတ်ညစ်ပြီး အလုပ်လုပ်နေရမည်။ စီးပွားရေးမှာ ခဏလေးတော့ စောင့်ရဦးမည်။
ငွေကြေးကိစ္စများကတော့ ချက်ချင်းလိုတဲ့ ငွေကိုချက်ချင်း ရှာလို့ မရဘူးနော်။ သဘောက ခဏစောင့်ရဦးမှာပါ။
စိတ်နှစ်ခွ ကိုယ်နှစ်ခွ ဖြစ်နေမည်။ သူတစ်ပါးအတွက်နဲ့ ရုတ်တစ်ရက် ငွေကုန်ကျမှုများ ရှိပါသည်။
ခရီးတွေက ရုတ်တစ်ရက်သွားလာခြင်း ရှောင်ပါ။ သူတစ်ပါးကိစ္စတွေနဲ့ အလုပ်ရှပ်နေမည်။ အချစ်ရေးမှာ အဆင်ပြေနေမည်။
အိမ်ထောင်ရေးကတော့ ခဏယာယီခွဲခွာ နေရမည်။ ကျန်းမာရေး အိပ်ရေးပျက်မည်။ ဗိုက်နာ ဗိုက်အောင့် ဖြစ်မည်။
ယတြာ = မိမိနေအိမ်တွင် သန့်ရှင်းရေးလုပ်ပါ။ ကံကောင်း လာစေရန်အတွက် ဆုတောင်းပါ။
ဂဏန်း ။ ။ ၃ ၈ ၁ ၁
ကြာသပတေး သားသမီးများ အတွက်
ဒီလအတွင်း မိမ်ိဖြစ်ချင်တာတွေ မျှော်လင့်တာတွေ တွေ့ရလိမ့်မယ်။ နေရာသစ် ရရှိမည်။
အလုပ်အကိုင်များတွင် အထက်လူကြီးနဲ့ ပက်သက်ပြီး အခက်ကြုံနေရမည်။ ငွေဝင်မည့် လမ်းစပေါ်မည်။
ငွေကြေးကိစ္စများတွေမှာ အဆင်ပြေနေမည်။ ငွေရဖို့ သေချာနေပြီ ငွေဝင်နေမည်။ ခရီးယာယီ တွေသွားမယ် ဆိုရင် မိမိရဲ့ အဖော်နဲ့ သွားပါ အကျိုးရှိပါသည်။
အချစ်ရေးမှာ ဆွတ်ပျံ့ဖွယ်ရာ အချစ်ဇတ်လမ်းလေး တွေ့ရမည်။အိမ်ထောင်ရေးမှာ အခုအချိန်မှာ အတွဲညီနေမဲ့ အချိန်လေးပါပဲ။
ကျန်းမာရေး သင့်တင့်လေးပါ ခါးနာ ဒူးနာ ဖြစ်နေမည်။
ယတြာ = ဘုရားတွင် ပန်း အနီရောင် ၇ ပွင့် တင်လှူ၍ လိုရာ ဆုတောင်းပါ။
အကျိုးပေးသောဂဏန်း ။ ။ ၁ ၇ ၆ ၁
ဒီလအတွင်းမှာ စိတ်ညစ်ပြီး အလုပ်လုပ်နေရမည်။စီးပွားရေးမှာ ခဏလေးတော့ စောင့်ရဦးမည်။ ငွေကြေးကိစ္စများကတော့ ချက်ချင်းလိုတဲ့ ငွေကိုချက်ချင်း ရှာလို့ မရဘူးနော်။
သဘောက ခဏစောင့်ရဦးမှာပါ။ စိတ်နှစ်ခွ ကိုယ်နှစ်ခွ ဖြစ်နေမည်။ သူတစ်ပါးအတွက်နဲ့ ရုတ်တစ်ရက် ငွေကုန်ကျမှုများ ရှိပါသည်။
ခရီးတွေက ရုတ်တစ်ရက် သွားလာခြင်း ရှောင်ပါ။ သူတစ်ပါးကိစ္စတွေနဲ့ အလုပ်ရှပ်နေမည်။ အချစ်ရေးမှာ အဆင်ပြေနေမည်။
အိမ်ထောင်ရေး ကတော့ ခဏယာယီခွဲခွာ နေရမည်။ ကျန်းမာရေးမှာ အိပ်ရေးပျက်မည်။ ဗိုက်နာ ဗိုက်အောင့် ဖြစ်မည်။
ယတြာ = မိမိနေအိမ်တွင် ဘုရားတွင် ဆွမ်းတော် ကပ်လှူ၍ လိုရာ ဆုတောင်းပါ။ ကံကောင်း လာစေရန်အတွက် ဆုတောင်းပါ။
ဂဏန်း ။ ။၅ ၇ ၈ ၈
ဒီလအတွင်းမှာ ရည်ရွှယ်တာလေးတွေ အောင်မြင်နေမည်။ အလုပ်ကိစ္စများ စီးပွားရေးကိစ္စတွေမှာတော့ အဆင်ပြေလာမည်။
အထက်လူကြီးနဲ့ အတူတူပြုလုပ်ဆောင်ရွှက် တာတွေ သိပ်အဆင်မပြေဘူး ဖြစ်နေပါသည်။ အလုပ်ထဲ စိတ်မပျော်ပဲ အလုပ်လုပ်နေရမည်။
လူတစ်ခြား စိတ်တစ်ခြား ဖြစ်နေတာပါ။ငွေကြေးကိစ္စတွေမှာ အဆင်မပြေသေးပါဘူးဗျာ မရခင်က ကုန်ကုန်နေလို့ စိတ်ညစ်နေရမည်။
ငွေကတော့ ဝင်လာမှာပါ။ ခရီးကိစ္စများ သွားလာမှု အဆင်မပြေသေးပါဘူး။ ဒီလအတွင်း စနေသားသမီးများ အပြောင်းအလဲ တစ်ခုခုဖြစ်မည်။
အချစ်ရေးကတော့ လွမ်းနေရမည်။အိမ်ထောင်ရေးကတော့ ရန်ဖြစ်နေမည့် အချိန်လေးပါ။
အခုလ ကျန်းမာရေး အနေနဲ့ ဦးခေါင်းပိုင်း ကျန်းမာ ရေးညံ့မည်။ ခေါင်းမူးတာတို့ ဖြစ်မည်။
ယတြာ = အုန်းညွန့် ၃ ညွန့်ကို စနေနေ့ နံနက် ၉ နာ၇ီ ၄၅ မီနစ်တွင် မိမိရဲ့အိမ်ဘုရားတွင် တင်လှူရင်း လိုရာ ဆုတောင်းယူပါ။ ကံကောင်းလာမည်။
အကျိုးပေးသော ဂဏန်း ။ ။5656
ယခုလတှငျး အလုပျအကိုငျ ကိစ်စမြား အဆငျမပွပေဲ ဖွဈနမေညျ။ ဟိုဟာလုပျရမလို ဒီဟာလုပျရမလို နဲ့ ဆုံးဖွတျရခကျနမေညျ။
အလုပျအကိုငျ အတှကျနဲ့ စိတျတိုငျးမကြ စိတျပြျောရှငျမရှိပဲ ဖွဈနမေညျ။ အလုပျပွောငျးလိုစိတျ နရောပွောငျး လိုစိတျမြား ဖွဈပျေါနမေညျ။
ယခုလတှငျး ငှကွေေးကိစ်စမြား အတှကျနဲ့ စိတျညဈနရေမညျ။ ငှကွေေးကိစ်စမြား အဆငျမပွသေေးပါ။ အဖတျမတငျသေးပါ။
အထကျ လူကွီးတဈဦးဦးထံမှ ကူညီမှရရှိမညျ။ လူမှုရေးကိစ်စမြားနှငျ့ မိသားစု ညီအဈကို မောငျနှမ ကိစ်စမြားတှငျ အနညျးငယျ စိတျညဈရမညျ။
ကောငျးသောခရီးတဈခုသို့ ထှကျရမညျ။ အင်ျဂါနံကိစ်စမြား တနလာင်ျနံကိစ်စမြား အတှကျနဲ့ အနညျးငယျ ဈိတျညဈနရေမညျ။ပညာရေး ရညျမှနျးခကျြမြား တိုးတကျလာမညျ။
အဆငျပွလောမညျ။ ဒီလအတှငျး အခဈြရေးကိစ်စမြား ခဈြသူနဲ့ အမွဲစကားမြားနရေမညျ။
ခဈြသူအသဈ ရရှိမညျ။ အိမျထောငျရေးမှာ အဆငျပွနေသေော အခြိနျလေးပါ။ ဒီလအတှကျ ကနျြးမာရေး ဗိုကျနာဗိုကျအောငျ့ ဖွဈမညျ။
ယတွာ = ကံကောငျးစရေနျ အတှကျ မိမိနအေိမျဘုရားတှငျ သရကျသီး ၃ လုံး လှူဒါနျး၍ ဆုတောငျးလိုကျပါ။
ဂဏနျး ။ ။ ရ ၉ ၀ ၁
တနင်ျလာ သားသမီးမြား အတှကျ
ဒီလအတှငျး အလုပျအကိုငျကိစ်စမြား အဆငျပွလောမညျ။ အလုပျအသဈ နရောအသဈမြားစတငျပွုလုပျရမညျ။
လုပျငနျးမြားအတှကျ အကူညီပေးသူ အကွံညဏျပေးသူမြား ပျေါပေါကျလာမညျ။ စီးပှားရေးလုပျငနျးမြား တိုးတကျ အောငျမွငျလာမညျ။
ယခုလအတှငျး အဖကျဖကျမှ ကံကောငျးလာသော အခြိနျလေး ဖွဈပါသညျ။ ယခုလအတှငျး ငှကွေေးကိစ်စမြား ကုနျကမြှုမြားနမေညျ။
စကျပစ်စညျး အသဈထပျဝငျမညျ။ မိသားစုအတှငျး ကောငျးသောပွောငျးလဲခွငျး ကွုံမညျ။ အလုပျအတှငျး သူငယျခငျြး မိတျဆှတေဈဦးမှ မိမိအား အထငျလှဲခွငျး ဖွဈမညျ။
ပညာရေး ကံကောငျးနသေော အခြိနျလေး ဖွဈပါသညျ။ ယခုလတှငျး အခဈြရေးကိစ်စမြား အဆငျပွနေသေော အခြိနျလေး ဖွဈပါသညျ။
အိမျထောငျရေး ကိစ်စမြား စိတျနသေဘောထား မတိုကျဆိုငျပဲ ဖွဈနမေညျ။ ယခုလ အတှငျး ကနျြးမာရေးမှာ ခါးနာ ၊ ဒူးနာ ဖွဈနမေညျ။
ယတွာ = ကံကောငျးစရေနျအတှကျ တနင်ျလာနတှေ့ငျ ကလေးတဈဦးဦးအား ငှေ ၁၅ ကပျြ လှူဒါနျး၍ဆုတောငျးလိုကျပါ။
ဒီလ အတှကျ ကံကောငျး အကြိုးပေးသော
ဂဏနျးမြား ။ ။ ၅ ၃ ၁ ၉
အင်ျဂါ သားသမီးမြား အတှကျ
ယခုလ အတှငျး အလုပျအကိုငျ ကိစ်စမြား အဆငျမပွသေေးပါ။ ရတာမလို လိုတာမရနဲ့ ဖွဈနမေညျ။
လုပျဆောငျမှုမြား အဆငျမပွပေဲ ဖွဈနမေညျ။ လုပျငနျးမြား လုပျကိုငျရာတှငျ ရနျအတိုကျ အခံမြားနှငျ့ မနာလိုသူမြား ရှိနပေါသညျ။
ငှကွေေးကိစ်စမြား ပုံမှနျလေး အဆငျပွလောမညျ။ အခကျအခဲတှေ မြားနသေျောလညျး အကူညီပေးသူမြား ပျေါလာမညျ။
ယခုလအတှငျး နရောထိုငျခငျးကိစ်စမြား ငှကွေေးကိစ်စအတှကျနဲ့ အနညျးငယျ စိတျညဈနရေမညျ။ အဝတျအထညျမြား ဝငျမညျ။
အမှကေိစ်စမြား ဖွဈပျေါလာမညျ။ ပညာရေး ဆကျလကျ ကောငျးမှနျလာမညျ။ ကံကောငျးနသေော အခြိနျဖွဈပါသညျ။
ဒီလအတှငျး အခဈြရေးမှာ အဆငျပွလောမညျ။ ခဏတာ ဝေးနသေျောလညျး ပွနျလညျဆုံဆညျးလာမညျ။
ဒီလအတှငျး အိမျထောငျရေး ကိစ်စမြား နသေော အခြိနျလေး ဖွဈပါသညျ။ ဒီလအတှငျး မကျြစိအားနညျးမညျ။
ယတွာ = ကံကောငျးစရေနျအတှကျ အင်ျဂါနေ့ နံနကျတှငျ အသကျကွီးသူတဈဦးအား မိမိနှဈသကျရာ သဈသီး ၅ လုံးကို လှူဒါနျး၍ ဆုတောငျးလိုကျပါ။
ဂဏနျးမြားမှာ ။ ။ ၃ ၉ ရ ၅
ဒီလအတှငျး ဆန်ဒတှဟော မပွညျ့စုံသေးပါဘူး။ အထကျလူကွီးတှနေဲ့လညျး သိပျပွီးအဆငျမပွသေေးပါဘူး။ သှားမတှေ့ သငျ့ပါ။
ဒီလအတှငျးမှာ စိတျညဈပွီး အလုပျလုပျနရေမညျ။ စီးပှားရေးမှာ ခဏလေးတော့ စောငျ့ရဦးမညျ။
ငှကွေေးကိစ်စမြားကတော့ ခကျြခငျြးလိုတဲ့ ငှကေိုခကျြခငျြး ရှာလို့ မရဘူးနျော။ သဘောက ခဏစောငျ့ရဦးမှာပါ။
စိတျနှဈခှ ကိုယျနှဈခှ ဖွဈနမေညျ။ သူတဈပါးအတှကျနဲ့ ရုတျတဈရကျ ငှကေုနျကမြှုမြား ရှိပါသညျ။
ခရီးတှကေ ရုတျတဈရကျသှားလာခွငျး ရှောငျပါ။ သူတဈပါးကိစ်စတှနေဲ့ အလုပျရှပျနမေညျ။ အခဈြရေးမှာ အဆငျပွနေမေညျ။
အိမျထောငျရေးကတော့ ခဏယာယီခှဲခှာ နရေမညျ။ ကနျြးမာရေး အိပျရေးပကျြမညျ။ ဗိုကျနာ ဗိုကျအောငျ့ ဖွဈမညျ။
ယတွာ = မိမိနအေိမျတှငျ သနျ့ရှငျးရေးလုပျပါ။ ကံကောငျး လာစရေနျအတှကျ ဆုတောငျးပါ။
ဂဏနျး ။ ။ ၃ ၈ ၁ ၁
ကွာသပတေး သားသမီးမြား အတှကျ
ဒီလအတှငျး မိမျိဖွဈခငျြတာတှေ မြှျောလငျ့တာတှေ တှရေ့လိမျ့မယျ။ နရောသဈ ရရှိမညျ။
အလုပျအကိုငျမြားတှငျ အထကျလူကွီးနဲ့ ပကျသကျပွီး အခကျကွုံနရေမညျ။ ငှဝေငျမညျ့ လမျးစပျေါမညျ။
ငှကွေေးကိစ်စမြားတှမှော အဆငျပွနေမေညျ။ ငှရေဖို့ သခြောနပွေီ ငှဝေငျနမေညျ။ ခရီးယာယီ တှသှေားမယျ ဆိုရငျ မိမိရဲ့ အဖျောနဲ့ သှားပါ အကြိုးရှိပါသညျ။
အခဈြရေးမှာ ဆှတျပြံ့ဖှယျရာ အခဈြဇတျလမျးလေး တှရေ့မညျ။အိမျထောငျရေးမှာ အခုအခြိနျမှာ အတှဲညီနမေဲ့ အခြိနျလေးပါပဲ။
ကနျြးမာရေး သငျ့တငျ့လေးပါ ခါးနာ ဒူးနာ ဖွဈနမေညျ။
ယတွာ = ဘုရားတှငျ ပနျး အနီရောငျ ရ ပှငျ့ တငျလှူ၍ လိုရာ ဆုတောငျးပါ။
အကြိုးပေးသောဂဏနျး ။ ။ ၁ ရ ၆ ၁
ဒီလအတှငျးမှာ စိတျညဈပွီး အလုပျလုပျနရေမညျ။စီးပှားရေးမှာ ခဏလေးတော့ စောငျ့ရဦးမညျ။ ငှကွေေးကိစ်စမြားကတော့ ခကျြခငျြးလိုတဲ့ ငှကေိုခကျြခငျြး ရှာလို့ မရဘူးနျော။
သဘောက ခဏစောငျ့ရဦးမှာပါ။ စိတျနှဈခှ ကိုယျနှဈခှ ဖွဈနမေညျ။ သူတဈပါးအတှကျနဲ့ ရုတျတဈရကျ ငှကေုနျကမြှုမြား ရှိပါသညျ။
ခရီးတှကေ ရုတျတဈရကျ သှားလာခွငျး ရှောငျပါ။ သူတဈပါးကိစ်စတှနေဲ့ အလုပျရှပျနမေညျ။ အခဈြရေးမှာ အဆငျပွနေမေညျ။
အိမျထောငျရေး ကတော့ ခဏယာယီခှဲခှာ နရေမညျ။ ကနျြးမာရေးမှာ အိပျရေးပကျြမညျ။ ဗိုကျနာ ဗိုကျအောငျ့ ဖွဈမညျ။
ယတွာ = မိမိနအေိမျတှငျ ဘုရားတှငျ ဆှမျးတျော ကပျလှူ၍ လိုရာ ဆုတောငျးပါ။ ကံကောငျး လာစရေနျအတှကျ ဆုတောငျးပါ။
ဂဏနျး ။ ။၅ ရ ၈ ၈
ဒီလအတှငျးမှာ ရညျရှယျတာလေးတှေ အောငျမွငျနမေညျ။ အလုပျကိစ်စမြား စီးပှားရေးကိစ်စတှမှောတော့ အဆငျပွလောမညျ။
အထကျလူကွီးနဲ့ အတူတူပွုလုပျဆောငျရှကျ တာတှေ သိပျအဆငျမပွဘေူး ဖွဈနပေါသညျ။ အလုပျထဲ စိတျမပြျောပဲ အလုပျလုပျနရေမညျ။
လူတဈခွား စိတျတဈခွား ဖွဈနတောပါ။ငှကွေေးကိစ်စတှမှော အဆငျမပွသေေးပါဘူးဗြာ မရခငျက ကုနျကုနျနလေို့ စိတျညဈနရေမညျ။
ငှကေတော့ ဝငျလာမှာပါ။ ခရီးကိစ်စမြား သှားလာမှု အဆငျမပွသေေးပါဘူး။ ဒီလအတှငျး စနသေားသမီးမြား အပွောငျးအလဲ တဈခုခုဖွဈမညျ။
အခဈြရေးကတော့ လှမျးနရေမညျ။အိမျထောငျရေးကတော့ ရနျဖွဈနမေညျ့ အခြိနျလေးပါ။
အခုလ ကနျြးမာရေး အနနေဲ့ ဦးခေါငျးပိုငျး ကနျြးမာ ရေးညံ့မညျ။ ခေါငျးမူးတာတို့ ဖွဈမညျ။
ယတွာ = အုနျးညှနျ့ ၃ ညှနျ့ကို စနနေေ့ နံနကျ ၉ နာရီ ၄၅ မီနဈတှငျ မိမိရဲ့အိမျဘုရားတှငျ တငျလှူရငျး လိုရာ ဆုတောငျးယူပါ။ ကံကောငျးလာမညျ။
အကြိုးပေးသော ဂဏနျး ။ ။5656
ဇင်ယော်နီ တစ်ပတ်အတွင်း ချိန်ဆရန် သင်၏ကံ (၂၀၁၇ နိုဝင်ဘာ ၂၇ မှ ဒီဇင်ဘာ ၃)
ဒီရက်တွေအတွင်းမှာ ရပ်ဝေးနဲ့ပတ်သက်ပြီး ငွေဝင်တာ၊ ငွေကိစ္စ ခရီးသွားရတာ၊ ထီပေါက်သလို ငွေဝင်လာတာ မျိုးတွေ ကြုံရတတ်ပါတယ်။ အလှူပွဲ၊ မင်္ဂလာပွဲကိစ္စတွေအတွက် စိတ်ညစ်ရတတ်တယ်။ စိတ်နှစ်ခွဖြစ်စရာတွေ၊ မတင်မကျဖြစ်စရာတွေ တစ်ခုပြီးတစ်ခု ကြုံနေတတ်ပါတယ်။ သေချာစီစဉ်ထားတဲ့ကိစ္စတွေလည်း လွဲသွား၊ ချော်သွားတတ်တယ်။ အလုပ်ကိစ္စတွေမှာ ကြီးကြီးမားမား နစ်နာဆုံးရှုံးခြင်းတွေ ကြုံရတတ်ပါတယ်။ ပစ္စည်းတစ်ခုကို အကြောင်းပြုပြီး စကားများ ဖြေရှင်းရတတ်ပါတယ်။ မိသားစုအတွင်းမှာလည်း တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက် ညျိမရ နှိုင်းမရတွေ ဖြစ်တတ်ပါတယ်။ အောက်လက်ငယ်သားအတွက်လည်း စိတ်ရှုပ်ရလိမ့်မယ်။ မိန်းမကြီးတစ်ယောက် ဝင်ရှုပ်နေ တတ်ပါတယ်။ ရပ်ဝေးက မိတ်ဆွေတွေ၊ ဆွေမျိုးသားချင်းတွေ ရောက်လာတတ်တယ်။ သူတို့ဆီမှာ သတင်းကောင်း၊ အဆက်အသွယ်ကောင်းတွေ ပါလာတတ်တယ်။ ဆရာသမားလိုပုဂ္ဂိုလ်တွေက အကူ အညီကောင်းပေးလာမယ်။ အချစ်ရေး၊ အိမ်ထောင်ရေးမှာတော့ တစ်ဦးနဲ့တစ်ဦး အထင်အမြင်လွဲမှားတာလေးတွေ ကြုံပြီးတဲ့နောက် အဆင်ပြေသွားပါလိမ့်မယ်။ ပညာရေးကိစ္စ၊ သင်တန်းကိစ္စတွေ အဆင်ပြေအောင်မြင်မယ်။ ဝမ်းဗိုက်ပိုင်း၊ ဆီး၊ မျက်စိ ကျန်းမာရေး ညံ့တတ်ပါတယ်။ ကံအကျိုးပေးဂဏန်း ၅/၃။ ကံ၏အပံ့အပိုးရရှိရန် မိတ်ဆွေများကို အုန်းနို့ခေါက်ဆွဲ ဒါနလုပ်ပါလေ။
ဒီရက်တွေအတွင်းမှာ ကိုယ်ကကျူးရင် ကိုယ့်ဒူးကိုယ်တောင် မယုံရဘူးဆိုတဲ့ကိန်းမျိုး ဆိုက်နေပါတယ်။ လုပ်သမျှ ကြံသမျှ အနှောက်အယှက်တွေ ကြုံနေမယ်။ မနာလို ရန်လိုသူ ပေါမယ်။ စွပ်စွဲနာမည်ဖျက်တာတွေ ခံရတတ်ပါတယ်။ မိတ်ဆွေရင်း၊ လူရင်းတွေ သစ္စာဖောက်တတ် တယ်။ နေရာထိုင်ခင်းကိစ္စ၊ အဆောက်အဦကိစ္စ ရည်ရွယ်ချက်တွ ပျက်သွားတတ်တယ်။ ခြေဦးတည့်ရာ ထွက်သွားချင်စိတ်တွေ ပေါ်လာတတ်တယ်။ အချစ်ရေး၊ အိမ်ထောင်ရေးမှာလည်း ညျိမရ၊ နှိုင်းမရ ဖြစ်တတ်ပါတယ်။ လိမ့်ကျတာ၊ ချော်လဲတာ၊ ခြေထောက်၊ ခါး ဒုက္ခပေးတာတွေ ကြုံရတတ်ပါတယ်။ ဆီး၊ မျက်စိကျန်းမာရေး ညံ့တတ်တယ်။ ပညာရေးကိစ္စ၊ သင်တန်းကိစ္စတွေ မတင်မကျ ဖြစ်ရတတ်တယ်။ လက်ရှိအလုပ်တွေကို ရပ်ပစ်ချင်စိတ် ပေါ်လာတတ်တယ်။ အလှူအတန်းကိစ္စတွေအတွက်လည်း စိတ်ညစ်ရတတ်ပါတယ်။ အဖိုးတန်အသုံးအဆောင်၊ လျှပ်စစ်ပစ္စည်းတွေဝင်မယ်။ အောက်လက်ငယ်သားအတွက် ဝမ်းသာစရာ တွေ ကြုံမယ်။ ပြဿနာတစ်ခု အလိုလိုရှင်းသွားမယ်။ မိမိအားရန်လုပ်နေသူ ရပ်ဝေးသို့ ထွက်သွားခြင်း၊ သူ့တရားသူ စီရင်သွားခြင်းဆိုတာမျိုးတွေ ဖြစ်သွားပါလိမ့်မယ်။ မထင်မှတ်တဲ့နေရာက ငွေတွေ အများ ကြီး ဝင်လာမယ်။ ငွေအဝင်ကြမ်းသလောက် အထွက်လည်း ကြမ်းတတ်ပါတယ်။ ကံအကျိုးပေးဂဏန်း ၆/၁။ ကံ၏အပံ့အပိုးရရှိရန် မြတ်စွာဘုရားမှာ စံပယ် ၈ ကုံး လှူဒါန်းပါလေ။
ဒီရက်တွေအတွင်းမှာ ခရီးကိစ္စ စိတ်ညစ်ရတတ်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ရပ်ဝေးက မိတ်ဆွေ၊ မောင်နှမတို့ရဲ့ သတင်းကောင်း ကြားရမယ်။ မထင်မှတ်တဲ့ဧည့်သည်တွေ ရောက်လာမယ်။ မိတ်ဆွေ ဟောင်း၊ ဆရာဟောင်းတွေနဲ့ ပြန်ဆုံရတတ်တယ်။ နှစ်ရှည်ကွဲကွာနေတဲ့ဆွေမျိုးတွေနဲ့လည်း ပြန်ဆုံရတတ် ပါတယ်။ ဆွေမျိုးရင်း၊ မိတ်ဆွေရင်းတို့ရဲ့ အသည်းအသန်သတင်း၊ စိတ်မကောင်းစရာသတင်းတွေ ကြားရတတ်ပါတယ်။ ပစ္စည်းတစ်ခုအတွက် စကားများ ဖြေရှင်းရတတ်တယ်။ အရောင်းမှား၊ အဝယ်မှား ဖြစ်တတ်တယ်။ အောက်လက်ငယ်သား၊ သားသမီးအတွက် ဆုံးဖြတ်ရခက်တဲ့ အကြပ်အတည်းမျိုး ကြုံရတတ်ပါတယ်။ ပြဿနာခပ်ကြီးကြီး နှစ်မျိုးနှစ်ခု ဖြေရှင်းရတတ်ပါတယ်။ မတော်တဆ ထိမိ ခိုက်မိဖြစ်တတ်ပါတယ်။ မိန်းမတစ်ယောက်ကြောင့် စိတ်အနှောက်အယှက်ကြီးစွာ ကြုံရတတ်တယ်။ ဈေးဆိုင်မှာ စကားများ ဖြေရှင်းရတတ်တယ်။ အချစ်ရေး၊ အိမ်ထောင်ရေးမှာ စိတ်ချမ်းသာစရာတွေ ဖြစ်လာမယ်။ လူကြီးမိဘတွေရဲ့ အကူအညီကောင်းရမယ်။ မိတ်ဆွေကောင်း၊ ဆရာကောင်းတွေ့ခြင်း၊ ပညာရေးကိစ္စ၊ သင်တန်းကိစ္စ စိတ်ချမ်းသာရခြင်း၊ အလုပ်များ နှစ်ဆတိုးချဲ့ရခြင်း၊ ဝင်ငွေတိုးခြင်း၊ ရပ်ဝေးကငွေများ၊ ပစ္စည်းများရောက် လာခြင်းများ ကြုံရတတ်ပါတယ်။ ကိုယ်ဝန်ဆောင်မိန်းမ ဒုက္ခပေးတတ်ပါတယ်။ ကံအကျိုးပေးဂဏန်း ၇/၄။ ကံ၏အပံ့အပိုးရရှိရန် နွမ်းပါးသူများကို အဝတ်အစား လှူဒါန်းပါလေ။
ဒီရက်တွေအတွင်းမှာ ထီကို ဂရုစိုက်ပြီး ထိုးသင့်ပါတယ်။ ၄ အစ၊ ၆ အစ ရှာပြီးထိုးသင့် ပါတယ်။ ငွေအရွှင်ကြီးရွှင်နေမယ်။ အဘက်ဘက်က ငွေတွေဝင်လာမယ်။ ရပ်ဝေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ လည်း ငွေတွေဝင်လာတတ်ပါတယ်။ အဖိုးတန်ပစ္စည်းတွေဝင်တာ၊ လက်ဆောင်ပစ္စည်းတွေရတာ၊ အကြောင်းကြောင်းနဲ့ထွက်နေတဲ့ ငွေတွေ၊ ပစ္စည်းတွေ ပြန်ဝင်လာတာ၊ ရပ်ဝေးက ဝမ်းသာစရာဧည့်သည် တွေရောက်လာတာ၊ နေရာထိုင်ခင်းကိစ္စ အဆောက်အဦးကိစ္စ အဆင်ပြေအောင်မြင်တာတွေ ကြုံလာမယ်။ လျှပ်စစ်နဲ့ပတ်သက်လို့ ပြင်ဆင်မွမ်းမံရတာတွေ လုပ်ဖြစ်မယ်။ အောက်လက်ငယ်သား သားသမီးအတွက် စိတ်ချမ်းသာစရာတွေ ကြုံလာမယ်။ အောက်လက်ငယ်သားရဲ့ ပညာရေးကိစ္စ၊ ခရီးကိစ္စတွေ အောင်မြင် မယ်။ အချစ်ရေး၊ အိမ်ထောင်ရေးမှာလည်း ကောင်းသောအပြောင်းအလဲတွေ ကြုံလာမယ်။ အဆင်မပြေ ဖြစ်နေသူ အဆင်ပြေသွားကြပါလိမ့်မယ်။ သူတစ်ပါးရဲ့ အချစ်ရေး၊ အိမ်ထောင်ရေးမှာတော့ ကြားညပ် ဖြေရှင်းရတတ်တယ်။ အတို့အထောင် ချောက်တွန်းလုပ်သူတွေကြောင့် မိသားစုစိတ်ဝမ်းကွဲရတတ်တယ်။ မတော်တဆထိခိုက်အန္တရာယ်ကြုံတာ၊ အပူလောင်တာမျိုးတွေ ကြုံတတ်ပါတယ်။ အလုပ်မှာ အတိုက် အခံအပြိုင်အဆိုင်တွေကြောင့် စိတ်ညစ်ရမယ်။ တမင်နှောက်ယှက်တာ ဒုက္ခပေးတာတွေ ကြုံလာတတ်ပါ တယ်။ အထူးသဖြင့် မိန်းမတစ်ယောက်က အကြပ်ကိုင်ခြိမ်းခြောက်တာမျိုး၊ ရန်တိုက်ပေးတာမျိုးတွေ လုပ်လာတတ်ပါတယ်။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် ကိုယ့်ဘက်က အောင်မြင်သွားပါလိမ့်မယ်။ ကံအကျိုးပေးဂဏန်း ၈/၂။ ကံ၏အပံ့အပိုးရရှိရန် မိတ်ဆွေများကို ခေါက်ဆွဲကြော် ဒါနလုပ်ပါလေ။
ဒီရက်တွေအတွင်းမှာ ခရီးတိုတွေ တစ်ခုပြီးတစ်ခု မနားရအောင် သွားနေရတတ်ပါတယ်။ ကိုယ့်ကိစ္စသာမက သူတစ်ပါးအတွက်ပါ ခရီးတွေသွားရမယ်။ ဒါပေမဲ့ သွားပါများခရီးရောက် ဆိုတဲ့အတိုင်းပဲ အလုပ်အဆက်အသွယ်ကောင်းတွေ၊ အခွင့်အလမ်းကောင်းတွေ ပေါ်လာတတ်ပါတယ်။ စိတ်တွေ တအားရှုပ်ထွေးနေမယ်။ ဟိုဟာလုပ်ရ ကောင်းနိုးနိုး၊ ဒီဟာ လုပ်ရ ကောင်းနိုးနိုးနဲ့ အချိန်ကုန်သွားလိမ့်မယ်။ အမှားမှားအယွင်းယွင်းတွေ လုပ်မိ၊ ပြောမိတတ်တယ်။ အရေးကြီးတဲ့ကိစ္စများ တိုင်ပင်ပြီးမှ လုပ်သင့်ပါတယ်။ ဘာသာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အလုပ်တွေ လုပ်ရတတ်ပါတယ်။ မိန်းမကြီးတစ်ယောက်ရဲ့ အကူအညီကောင်း ရရှိမယ်။ ဆွေမျိုး၊ မိတ်ဆွေရင်းရဲ့ ရာထူးတက်တဲ့ သတင်း၊ ထီဆုကြီးပေါက်တဲ့သတင်း စသည်ဖြင့် ဝမ်းသာစရာ ကြုံရ၊ ကြားရတတ်ပါတာယ်။ ပစ္စည်းတစ်ခုအတွက် စကားများ ဖြေရှင်းရတတ်ပါတယ်။ အထင်လွဲစွပ်စွဲခံရတာ၊ အတို့အထောင် ခံရတာတွေ ကြုံရတတ်ပါတယ်။ အိမ်ကိစ္စ၊ နေရာကိစ္စ အဆင်မပြေတာ၊ ထိတ်လန့်တုန်လှုပ်စရာ အိပ်မက်ဆိုးတွေ မက်တာ၊ အောက်လက်ငယ်သားတို့ကို အကြောင်းပြုပြီး ပြောဆိုဖြေရှင်းရတာတွေ ကြုံရတတ်ပါတယ်။ ကိုယ့်ကို ရန်လုပ်နေတဲ့လူ၊ ဒုက္ခပေးနေတဲ့လူ ရပ်ဝေးကို ရောက်သွားမယ်။ ဒါမှမဟုတ် သေတဲ့အထိ ဖြစ်သွားတတ်ပါတယ်။ အချစ်ရေး၊အိမ်ထောင်ရေးများမှာတော့ ညှိနှိုင်းမရတွေ ဖြစ်တတ်ပါတယ်။ ရှေ့တိုးရခက်၊ နောက်ဆုတ်ရခက် အခြေအနေမျိုးတွေ၊ လူကြီးတွေဝင်ရှုပ်လို့ အပူမီးတွေ ပိုတောက်တဲ့ကိန်း ဆိုက်သွားတတ်ပါတယ်။ ကံအကျိုးပေးဂဏန်း ၉/၆။ ကံ၏အပံ့အပိုးရရှိရန် မိတ်ဆွေများကို တရားစာအုပ် ဒါနပြုလုပ်ပါလေ။
ဒီရက်တွေအတွင်းမှာ အိမ်မှာ၊ အလုပ်မှာ ရှိတဲ့ပစ္စည်းတွေ တစ်ခုပြီးတစ်ခု ထွက်တတ်၊ ပျက်တတ်ပါတယ်။ ဆွေမျိုး၊ မိတ်ဆွေထဲက မိန်းမတစ်ယောက် ဒုက္ခပေးလာတတ်တယ်။ လူရင်းထဲက အမှုအခင်း၊ အချုပ်အနှောင် ကြုံရတတ်ပါတယ်။ မိသားစု၊ ကြီးကဲသူတွေနဲ့လည်း အတိုက်အခံကြီးစွာ ဖြစ်ရတတ်ပါတယ်။ နိုင်ငံခြား၊ လူမျိုးခြားနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ အလုပ် အဆင်ပြေအောင်မြင်မှုတွေ ကြုံမယ်။ ကောင်းသောခရီးတွေလည်း သွားရတတ်ပါတယ်။ အဖိုးတန်အဝတ်အထည်၊ အသုံးအဆောင်ပစ္စည်းတွေလည်း ဝင်လာတတ်တယ်။ ရှိပြီးသားပစ္စည်းတွေကတော့ ထွက်တတ်၊ ပျောက်တတ်ပါတယ်။ နေရာထိုင်ခင်းကိစ္စ၊ အဆောက်အဦးကိစ္စတွေမှာ ညျိမရနှိုင်းမရ ဖြစ်တတ်တယ်။ မိခင်၊ အဒေါ်၊ အစ်မ စသူတွေနဲ့ စိတ်သဘောကြီးစွာ ကွဲရတတ်ပါတယ် …။ အဖိုးတန် ယာဉ်၊ လျှပ်စစ်ပစ္စည်း၊ အလှဆင် ပစ္စည်းတွေလည်း ဝင်လာတတ်ပါတယ်။ မီး၊ အပူ ကြုံရတတ်တယ်။ မတော်တဆ ထိမိ ခိုက်မိဖြစ်တတ်တယ်။ အိမ်က၊ ဒါမှမဟုတ် အလုပ်က ပြဿနာဖြစ်ပြီး ထွက်သွားမိတတ်ပါတယ်။ အချစ်ရေး၊ အိမ်ထောင်ရေးမှာတော့ အဖုအထစ်တွေရှိနေရင် ပြေလည်သွားလိမ့်မယ်။ ပျော်ရွှင်ဖွယ်ခရီးတွေလည်း သွားရတတ်ပါတယ်။ ပညာရေးကိစ္စ၊ သင်တန်းကိစ္စတွေမှာတော့ ရှေ့တိုးရအခက်၊ နောက်ဆုတ်ရအခက် ဖြစ်နေရ တတ်ပါတယ်။ ရပ်ဝေးအဆက်အသွယ်ကောင်းတွေ ပေါ်လာတတ်ပါတယ်။ ထီပေါက်သလိုလည်း ငွေတွေ ဝေါကနဲ ဝင်လာတတ်ပါတယ်။ လက်၊ ရင်ဘတ်၊ အောင့်တာ၊ နာတာတွေ ဖြစ်တတ်ပါတယ်။ ကံအကျိုးပေးဂဏန်း ၁/၄။ ကံ၏အပံ့အပိုးရရှိရန် ဘုရားသောကြာထောင့်တွင် သာသနာ့အလံ ၆ လက် လှူဒါန်းပါလေ။
ဒီရက်တွေအတွင်းမှာ စိတ်နှစ်ခွဖြစ်စရာတွေ၊ မတင်မကျဖြစ်စရာတွေ တစ်ခုပြီးတစ်ခု ကြုံနေတတ်ပါတယ်။ သေချာစီစဉ်ထားတဲ့ ကိစ္စတွေလည်း လွဲသွား၊ ချော်သွားတတ်တယ်။ အလုပ်ကိစ္စတွေမှာ ကြီးကြီးမားမား နစ်နာဆုံးရှုံးခြင်းတွေ ကြုံရတတ်ပါတယ်။ ပစ္စည်းတစ်ခုကို အကြောင်းပြုပြီး စကားများဖြေရှင်းရတတ်ပါတယ်။ မိသားစုအတွင်းမှာ တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက် ညျိမရ နှိုင်းမရတွေ ဖြစ်တတ်ပါတယ်။ အောက်လက်ငယ်သားအတွက်လည်း စိတ်ရှုပ်ရလိမ့်မယ်။ မိန်းမကြီးတစ်ယောက် ဝင်ရှုပ်နေတတ်ပါတယ်။ ရပ်ဝေးက မိတ်ဆွေတွေ၊ ဆွေမျိုးသားချင်းတွေ ရောက်လာတတ်တယ်။ သူတို့ဆီမှာ သတင်းကောင်း၊ အဆက်အသွယ်ကောင်းတွေ ပါလာတတ်တယ်။ ဆရာသမားလို ပုဂ္ဂိုလ်တွေက အကူအညီကောင်းပေးလာမယ်။ ရပ်ဝေးနဲ့ပတ်သက်ပြီး ငွေဝင်တာ၊ ငွေကိစ္စခရီးသွားရတာ၊ ထီပေါက်သလို ငွေဝင်လာတာမျိုးတွေ ကြုံရတတ်ပါတယ်။ အလှူပွဲ၊ မင်္ဂလာပွဲကိစ္စတွေအတွက် စိတ်ညစ်ရတတ်တယ်။ အချစ်ရေး၊ အိမ်ထောင်ရေးမှာတော့ တစ်ဦးနဲ့တစ်ဦး အထင်အမြင်လွဲမှားတာလေးတွေ ကြုံပြီးတဲ့နောက် အဆင်ပြေသွားပါလိမ့်မယ်။ ပညာရေးကိစ္စ၊ သင်တန်းကိစ္စတွေ အဆင်ပြေအောင်မြင်မယ်။ ဝမ်းဗိုက်ပိုင်း၊ ဆီး၊ မျက်စိ ကျန်းမာရေးညံ့တတ်ပါတယ်။ ကံအကျိုးပေးဂဏန်း ၄/၆။ ကံ၏အပံ့အပိုးရရှိရန် ဘုရားမှာ သရက်ယိုကပ်လှူပါလေ။ ကံအကျိုးပေးဂဏန်း ၁/၆။ ကံ၏အပံ့အပိုးရရှိရန် မြတ်စွာဘုရားမှာ သပြေ ၂၁ ညွန့် လှူဒါန်းပါလေ။
ဒီရကျတှအေတှငျးမှာ ရပျဝေးနဲ့ပတျသကျပွီး ငှဝေငျတာ၊ ငှကေိစ်စ ခရီးသှားရတာ၊ ထီပေါကျသလို ငှဝေငျလာတာ မြိုးတှေ ကွုံရတတျပါတယျ။ အလှူပှဲ၊ မင်ျဂလာပှဲကိစ်စတှအေတှကျ စိတျညဈရတတျတယျ။ စိတျနှဈခှဖွဈစရာတှေ၊ မတငျမကဖြွဈစရာတှေ တဈခုပွီးတဈခု ကွုံနတေတျပါတယျ။ သခြောစီစဉျထားတဲ့ကိစ်စတှလေညျး လှဲသှား၊ ခြျောသှားတတျတယျ။ အလုပျကိစ်စတှမှော ကွီးကွီးမားမား နဈနာဆုံးရှုံးခွငျးတှေ ကွုံရတတျပါတယျ။ ပစ်စညျးတဈခုကို အကွောငျးပွုပွီး စကားမြား ဖွရှေငျးရတတျပါတယျ။ မိသားစုအတှငျးမှာလညျး တဈယောကျနဲ့တဈယောကျ ညြိမရ နှိုငျးမရတှေ ဖွဈတတျပါတယျ။ အောကျလကျငယျသားအတှကျလညျး စိတျရှုပျရလိမျ့မယျ။ မိနျးမကွီးတဈယောကျ ဝငျရှုပျနေ တတျပါတယျ။ ရပျဝေးက မိတျဆှတှေေ၊ ဆှမြေိုးသားခငျြးတှေ ရောကျလာတတျတယျ။ သူတို့ဆီမှာ သတငျးကောငျး၊ အဆကျအသှယျကောငျးတှေ ပါလာတတျတယျ။ ဆရာသမားလိုပုဂ်ဂိုလျတှကေ အကူ အညီကောငျးပေးလာမယျ။ အခဈြရေး၊ အိမျထောငျရေးမှာတော့ တဈဦးနဲ့တဈဦး အထငျအမွငျလှဲမှားတာလေးတှေ ကွုံပွီးတဲ့နောကျ အဆငျပွသှေားပါလိမျ့မယျ။ ပညာရေးကိစ်စ၊ သငျတနျးကိစ်စတှေ အဆငျပွအေောငျမွငျမယျ။ ဝမျးဗိုကျပိုငျး၊ ဆီး၊ မကျြစိ ကနျြးမာရေး ညံ့တတျပါတယျ။ ကံအကြိုးပေးဂဏနျး ၅/၃။ ကံ၏အပံ့အပိုးရရှိရနျ မိတျဆှမြေားကို အုနျးနို့ခေါကျဆှဲ ဒါနလုပျပါလေ။
ဒီရကျတှအေတှငျးမှာ ကိုယျကကြူးရငျ ကိုယျ့ဒူးကိုယျတောငျ မယုံရဘူးဆိုတဲ့ကိနျးမြိုး ဆိုကျနပေါတယျ။ လုပျသမြှ ကွံသမြှ အနှောကျအယှကျတှေ ကွုံနမေယျ။ မနာလို ရနျလိုသူ ပေါမယျ။ စှပျစှဲနာမညျဖကျြတာတှေ ခံရတတျပါတယျ။ မိတျဆှရေငျး၊ လူရငျးတှေ သစ်စာဖောကျတတျ တယျ။ နရောထိုငျခငျးကိစ်စ၊ အဆောကျအဦကိစ်စ ရညျရှယျခကျြတှ ပကျြသှားတတျတယျ။ ခွဦေးတညျ့ရာ ထှကျသှားခငျြစိတျတှေ ပျေါလာတတျတယျ။ အခဈြရေး၊ အိမျထောငျရေးမှာလညျး ညြိမရ၊ နှိုငျးမရ ဖွဈတတျပါတယျ။ လိမျ့ကတြာ၊ ခြျောလဲတာ၊ ခွထေောကျ၊ ခါး ဒုက်ခပေးတာတှေ ကွုံရတတျပါတယျ။ ဆီး၊ မကျြစိကနျြးမာရေး ညံ့တတျတယျ။ ပညာရေးကိစ်စ၊ သငျတနျးကိစ်စတှေ မတငျမကြ ဖွဈရတတျတယျ။ လကျရှိအလုပျတှကေို ရပျပဈခငျြစိတျ ပျေါလာတတျတယျ။ အလှူအတနျးကိစ်စတှအေတှကျလညျး စိတျညဈရတတျပါတယျ။ အဖိုးတနျအသုံးအဆောငျ၊ လြှပျစဈပစ်စညျးတှဝေငျမယျ။ အောကျလကျငယျသားအတှကျ ဝမျးသာစရာ တှေ ကွုံမယျ။ ပွဿနာတဈခု အလိုလိုရှငျးသှားမယျ။ မိမိအားရနျလုပျနသေူ ရပျဝေးသို့ ထှကျသှားခွငျး၊ သူ့တရားသူ စီရငျသှားခွငျးဆိုတာမြိုးတှေ ဖွဈသှားပါလိမျ့မယျ။ မထငျမှတျတဲ့နရောက ငှတှေေ အမြား ကွီး ဝငျလာမယျ။ ငှအေဝငျကွမျးသလောကျ အထှကျလညျး ကွမျးတတျပါတယျ။ ကံအကြိုးပေးဂဏနျး ၆/၁။ ကံ၏အပံ့အပိုးရရှိရနျ မွတျစှာဘုရားမှာ စံပယျ ၈ ကုံး လှူဒါနျးပါလေ။
ဒီရကျတှအေတှငျးမှာ ခရီးကိစ်စ စိတျညဈရတတျပါတယျ။ ဒါပမေဲ့ ရပျဝေးက မိတျဆှေ၊ မောငျနှမတို့ရဲ့ သတငျးကောငျး ကွားရမယျ။ မထငျမှတျတဲ့ဧညျ့သညျတှေ ရောကျလာမယျ။ မိတျဆှေ ဟောငျး၊ ဆရာဟောငျးတှနေဲ့ ပွနျဆုံရတတျတယျ။ နှဈရှညျကှဲကှာနတေဲ့ဆှမြေိုးတှနေဲ့လညျး ပွနျဆုံရတတျ ပါတယျ။ ဆှမြေိုးရငျး၊ မိတျဆှရေငျးတို့ရဲ့ အသညျးအသနျသတငျး၊ စိတျမကောငျးစရာသတငျးတှေ ကွားရတတျပါတယျ။ ပစ်စညျးတဈခုအတှကျ စကားမြား ဖွရှေငျးရတတျတယျ။ အရောငျးမှား၊ အဝယျမှား ဖွဈတတျတယျ။ အောကျလကျငယျသား၊ သားသမီးအတှကျ ဆုံးဖွတျရခကျတဲ့ အကွပျအတညျးမြိုး ကွုံရတတျပါတယျ။ ပွဿနာခပျကွီးကွီး နှဈမြိုးနှဈခု ဖွရှေငျးရတတျပါတယျ။ မတျောတဆ ထိမိ ခိုကျမိဖွဈတတျပါတယျ။ မိနျးမတဈယောကျကွောငျ့ စိတျအနှောကျအယှကျကွီးစှာ ကွုံရတတျတယျ။ ဈေးဆိုငျမှာ စကားမြား ဖွရှေငျးရတတျတယျ။ အခဈြရေး၊ အိမျထောငျရေးမှာ စိတျခမျြးသာစရာတှေ ဖွဈလာမယျ။ လူကွီးမိဘတှရေဲ့ အကူအညီကောငျးရမယျ။ မိတျဆှကေောငျး၊ ဆရာကောငျးတှခွေ့ငျး၊ ပညာရေးကိစ်စ၊ သငျတနျးကိစ်စ စိတျခမျြးသာရခွငျး၊ အလုပျမြား နှဈဆတိုးခြဲ့ရခွငျး၊ ဝငျငှတေိုးခွငျး၊ ရပျဝေးကငှမြေား၊ ပစ်စညျးမြားရောကျ လာခွငျးမြား ကွုံရတတျပါတယျ။ ကိုယျဝနျဆောငျမိနျးမ ဒုက်ခပေးတတျပါတယျ။ ကံအကြိုးပေးဂဏနျး ရ/၄။ ကံ၏အပံ့အပိုးရရှိရနျ နှမျးပါးသူမြားကို အဝတျအစား လှူဒါနျးပါလေ။
ဒီရကျတှအေတှငျးမှာ ထီကို ဂရုစိုကျပွီး ထိုးသငျ့ပါတယျ။ ၄ အစ၊ ၆ အစ ရှာပွီးထိုးသငျ့ ပါတယျ။ ငှအေရှငျကွီးရှငျနမေယျ။ အဘကျဘကျက ငှတှေဝေငျလာမယျ။ ရပျဝေးနဲ့ပတျသကျပွီးတော့ လညျး ငှတှေဝေငျလာတတျပါတယျ။ အဖိုးတနျပစ်စညျးတှဝေငျတာ၊ လကျဆောငျပစ်စညျးတှရေတာ၊ အကွောငျးကွောငျးနဲ့ထှကျနတေဲ့ ငှတှေေ၊ ပစ်စညျးတှေ ပွနျဝငျလာတာ၊ ရပျဝေးက ဝမျးသာစရာဧညျ့သညျ တှရေောကျလာတာ၊ နရောထိုငျခငျးကိစ်စ အဆောကျအဦးကိစ်စ အဆငျပွအေောငျမွငျတာတှေ ကွုံလာမယျ။ လြှပျစဈနဲ့ပတျသကျလို့ ပွငျဆငျမှမျးမံရတာတှေ လုပျဖွဈမယျ။ အောကျလကျငယျသား သားသမီးအတှကျ စိတျခမျြးသာစရာတှေ ကွုံလာမယျ။ အောကျလကျငယျသားရဲ့ ပညာရေးကိစ်စ၊ ခရီးကိစ်စတှေ အောငျမွငျ မယျ။ အခဈြရေး၊ အိမျထောငျရေးမှာလညျး ကောငျးသောအပွောငျးအလဲတှေ ကွုံလာမယျ။ အဆငျမပွေ ဖွဈနသေူ အဆငျပွသှေားကွပါလိမျ့မယျ။ သူတဈပါးရဲ့ အခဈြရေး၊ အိမျထောငျရေးမှာတော့ ကွားညပျ ဖွရှေငျးရတတျတယျ။ အတို့အထောငျ ခြောကျတှနျးလုပျသူတှကွေောငျ့ မိသားစုစိတျဝမျးကှဲရတတျတယျ။ မတျောတဆထိခိုကျအန်တရာယျကွုံတာ၊ အပူလောငျတာမြိုးတှေ ကွုံတတျပါတယျ။ အလုပျမှာ အတိုကျ အခံအပွိုငျအဆိုငျတှကွေောငျ့ စိတျညဈရမယျ။ တမငျနှောကျယှကျတာ ဒုက်ခပေးတာတှေ ကွုံလာတတျပါ တယျ။ အထူးသဖွငျ့ မိနျးမတဈယောကျက အကွပျကိုငျခွိမျးခွောကျတာမြိုး၊ ရနျတိုကျပေးတာမြိုးတှေ လုပျလာတတျပါတယျ။ ဘာပဲဖွဈဖွဈ ကိုယျ့ဘကျက အောငျမွငျသှားပါလိမျ့မယျ။ ကံအကြိုးပေးဂဏနျး ၈/၂။ ကံ၏အပံ့အပိုးရရှိရနျ မိတျဆှမြေားကို ခေါကျဆှဲကွျော ဒါနလုပျပါလေ။
ဒီရကျတှအေတှငျးမှာ ခရီးတိုတှေ တဈခုပွီးတဈခု မနားရအောငျ သှားနရေတတျပါတယျ။ ကိုယျ့ကိစ်စသာမက သူတဈပါးအတှကျပါ ခရီးတှသှေားရမယျ။ ဒါပမေဲ့ သှားပါမြားခရီးရောကျ ဆိုတဲ့အတိုငျးပဲ အလုပျအဆကျအသှယျကောငျးတှေ၊ အခှငျ့အလမျးကောငျးတှေ ပျေါလာတတျပါတယျ။ စိတျတှေ တအားရှုပျထှေးနမေယျ။ ဟိုဟာလုပျရ ကောငျးနိုးနိုး၊ ဒီဟာ လုပျရ ကောငျးနိုးနိုးနဲ့ အခြိနျကုနျသှားလိမျ့မယျ။ အမှားမှားအယှငျးယှငျးတှေ လုပျမိ၊ ပွောမိတတျတယျ။ အရေးကွီးတဲ့ကိစ်စမြား တိုငျပငျပွီးမှ လုပျသငျ့ပါတယျ။ ဘာသာရေးနဲ့ပတျသကျတဲ့အလုပျတှေ လုပျရတတျပါတယျ။ မိနျးမကွီးတဈယောကျရဲ့ အကူအညီကောငျး ရရှိမယျ။ ဆှမြေိုး၊ မိတျဆှရေငျးရဲ့ ရာထူးတကျတဲ့ သတငျး၊ ထီဆုကွီးပေါကျတဲ့သတငျး စသညျဖွငျ့ ဝမျးသာစရာ ကွုံရ၊ ကွားရတတျပါတာယျ။ ပစ်စညျးတဈခုအတှကျ စကားမြား ဖွရှေငျးရတတျပါတယျ။ အထငျလှဲစှပျစှဲခံရတာ၊ အတို့အထောငျ ခံရတာတှေ ကွုံရတတျပါတယျ။ အိမျကိစ်စ၊ နရောကိစ်စ အဆငျမပွတော၊ ထိတျလနျ့တုနျလှုပျစရာ အိပျမကျဆိုးတှေ မကျတာ၊ အောကျလကျငယျသားတို့ကို အကွောငျးပွုပွီး ပွောဆိုဖွရှေငျးရတာတှေ ကွုံရတတျပါတယျ။ ကိုယျ့ကို ရနျလုပျနတေဲ့လူ၊ ဒုက်ခပေးနတေဲ့လူ ရပျဝေးကို ရောကျသှားမယျ။ ဒါမှမဟုတျ သတေဲ့အထိ ဖွဈသှားတတျပါတယျ။ အခဈြရေး၊အိမျထောငျရေးမြားမှာတော့ ညှိနှိုငျးမရတှေ ဖွဈတတျပါတယျ။ ရှတေို့းရခကျ၊ နောကျဆုတျရခကျ အခွအေနမြေိုးတှေ၊ လူကွီးတှဝေငျရှုပျလို့ အပူမီးတှေ ပိုတောကျတဲ့ကိနျး ဆိုကျသှားတတျပါတယျ။ ကံအကြိုးပေးဂဏနျး ၉/၆။ ကံ၏အပံ့အပိုးရရှိရနျ မိတျဆှမြေားကို တရားစာအုပျ ဒါနပွုလုပျပါလေ။
ဒီရကျတှအေတှငျးမှာ အိမျမှာ၊ အလုပျမှာ ရှိတဲ့ပစ်စညျးတှေ တဈခုပွီးတဈခု ထှကျတတျ၊ ပကျြတတျပါတယျ။ ဆှမြေိုး၊ မိတျဆှထေဲက မိနျးမတဈယောကျ ဒုက်ခပေးလာတတျတယျ။ လူရငျးထဲက အမှုအခငျး၊ အခြုပျအနှောငျ ကွုံရတတျပါတယျ။ မိသားစု၊ ကွီးကဲသူတှနေဲ့လညျး အတိုကျအခံကွီးစှာ ဖွဈရတတျပါတယျ။ နိုငျငံခွား၊ လူမြိုးခွားနဲ့ ပတျသကျတဲ့ အလုပျ အဆငျပွအေောငျမွငျမှုတှေ ကွုံမယျ။ ကောငျးသောခရီးတှလေညျး သှားရတတျပါတယျ။ အဖိုးတနျအဝတျအထညျ၊ အသုံးအဆောငျပစ်စညျးတှလေညျး ဝငျလာတတျတယျ။ ရှိပွီးသားပစ်စညျးတှကေတော့ ထှကျတတျ၊ ပြောကျတတျပါတယျ။ နရောထိုငျခငျးကိစ်စ၊ အဆောကျအဦးကိစ်စတှမှော ညြိမရနှိုငျးမရ ဖွဈတတျတယျ။ မိခငျ၊ အဒျေါ၊ အဈမ စသူတှနေဲ့ စိတျသဘောကွီးစှာ ကှဲရတတျပါတယျ …။ အဖိုးတနျ ယာဉျ၊ လြှပျစဈပစ်စညျး၊ အလှဆငျ ပစ်စညျးတှလေညျး ဝငျလာတတျပါတယျ။ မီး၊ အပူ ကွုံရတတျတယျ။ မတျောတဆ ထိမိ ခိုကျမိဖွဈတတျတယျ။ အိမျက၊ ဒါမှမဟုတျ အလုပျက ပွဿနာဖွဈပွီး ထှကျသှားမိတတျပါတယျ။ အခဈြရေး၊ အိမျထောငျရေးမှာတော့ အဖုအထဈတှရှေိနရေငျ ပွလေညျသှားလိမျ့မယျ။ ပြျောရှငျဖှယျခရီးတှလေညျး သှားရတတျပါတယျ။ ပညာရေးကိစ်စ၊ သငျတနျးကိစ်စတှမှောတော့ ရှတေို့းရအခကျ၊ နောကျဆုတျရအခကျ ဖွဈနရေ တတျပါတယျ။ ရပျဝေးအဆကျအသှယျကောငျးတှေ ပျေါလာတတျပါတယျ။ ထီပေါကျသလိုလညျး ငှတှေေ ဝေါကနဲ ဝငျလာတတျပါတယျ။ လကျ၊ ရငျဘတျ၊ အောငျ့တာ၊ နာတာတှေ ဖွဈတတျပါတယျ။ ကံအကြိုးပေးဂဏနျး ၁/၄။ ကံ၏အပံ့အပိုးရရှိရနျ ဘုရားသောကွာထောငျ့တှငျ သာသနာ့အလံ ၆ လကျ လှူဒါနျးပါလေ။
ဒီရကျတှအေတှငျးမှာ စိတျနှဈခှဖွဈစရာတှေ၊ မတငျမကဖြွဈစရာတှေ တဈခုပွီးတဈခု ကွုံနတေတျပါတယျ။ သခြောစီစဉျထားတဲ့ ကိစ်စတှလေညျး လှဲသှား၊ ခြျောသှားတတျတယျ။ အလုပျကိစ်စတှမှော ကွီးကွီးမားမား နဈနာဆုံးရှုံးခွငျးတှေ ကွုံရတတျပါတယျ။ ပစ်စညျးတဈခုကို အကွောငျးပွုပွီး စကားမြားဖွရှေငျးရတတျပါတယျ။ မိသားစုအတှငျးမှာ တဈယောကျနဲ့တဈယောကျ ညြိမရ နှိုငျးမရတှေ ဖွဈတတျပါတယျ။ အောကျလကျငယျသားအတှကျလညျး စိတျရှုပျရလိမျ့မယျ။ မိနျးမကွီးတဈယောကျ ဝငျရှုပျနတေတျပါတယျ။ ရပျဝေးက မိတျဆှတှေေ၊ ဆှမြေိုးသားခငျြးတှေ ရောကျလာတတျတယျ။ သူတို့ဆီမှာ သတငျးကောငျး၊ အဆကျအသှယျကောငျးတှေ ပါလာတတျတယျ။ ဆရာသမားလို ပုဂ်ဂိုလျတှကေ အကူအညီကောငျးပေးလာမယျ။ ရပျဝေးနဲ့ပတျသကျပွီး ငှဝေငျတာ၊ ငှကေိစ်စခရီးသှားရတာ၊ ထီပေါကျသလို ငှဝေငျလာတာမြိုးတှေ ကွုံရတတျပါတယျ။ အလှူပှဲ၊ မင်ျဂလာပှဲကိစ်စတှအေတှကျ စိတျညဈရတတျတယျ။ အခဈြရေး၊ အိမျထောငျရေးမှာတော့ တဈဦးနဲ့တဈဦး အထငျအမွငျလှဲမှားတာလေးတှေ ကွုံပွီးတဲ့နောကျ အဆငျပွသှေားပါလိမျ့မယျ။ ပညာရေးကိစ်စ၊ သငျတနျးကိစ်စတှေ အဆငျပွအေောငျမွငျမယျ။ ဝမျးဗိုကျပိုငျး၊ ဆီး၊ မကျြစိ ကနျြးမာရေးညံ့တတျပါတယျ။ ကံအကြိုးပေးဂဏနျး ၄/၆။ ကံ၏အပံ့အပိုးရရှိရနျ ဘုရားမှာ သရကျယိုကပျလှူပါလေ။ ကံအကြိုးပေးဂဏနျး ၁/၆။ ကံ၏အပံ့အပိုးရရှိရနျ မွတျစှာဘုရားမှာ သပွေ ၂၁ ညှနျ့ လှူဒါနျးပါလေ။
(၇) ရက်သားသမီးများအတွက် တက္ကသိုလ် စိုးမိုးနိုင် ဟောတဲ့ တစ်ပတ်စာ ( ၂၇-၁၁-၂၀၁၇ မှ ၃-၁၂-၂၀၁၇ )
တက္ကသိုလ် စိုးမိုးနိုင် ဟောတဲ့ တစ်ပတ်စာ
( ၂၇-၁၁-၂၀၁၇ မှ ၃-၁၂-၂၀၁၇ )
26.11.2017 မှ 2.12.2017 အထိ တစ်ပါတ်စာ ကံကြမ္မာဟောစာတမ်း
26.11.2017 မှ 2.12.2017 အထိ
၇ ရက်သားသမီးများ အတွက် အချစ် ဗေဒင်…!
တနင်္ဂနွေ သားသမီး …
အရမ်းချစ်တတ်ပါတယ်။ သို့သော် နှစ်ယောက်ပြိုင်တူ ထားချင်တတ်တယ်။ သူတို့အတွေးတော့အချစ်ဆိုတာ တစ်ယောက်ထဲနဲ့ပြီးရမှာလား။
အချစ်ဆိုတာပေးလို့ကုန်သွားတဲ့အရာမှမဟုတ်တာနော်….လို့များသောအားဖြင့်ခံယူထားတတ်ကြတယ်အခြေအနေပေးရင်တစ်ယောက်ထက်ပိုရတတ်ယူတတ်ပါတယ်သူများအထင်ကြီးလေးစားအောင်ပြောဆိုတတ်ကြပါတယ်သူတို့နဲ့စကားပြောပြီးရင်သူတို့ ကိုအထင်ကြီးလေးစားသွားတတ်ကြပါတယ်။ တကယ်တမ်းကျတော့ အပြောတစ်မျိုးအလုပ်တစ်မျိုးဖြစ်တတ်ပါတယ်။ အမျိုးသားများဆို ဇွတ် အတင်းချစ်ရေးဆိုတတ်တယ်
အမျိုးသမီးများကျတော့ ပွင့်လင်းတယ်၊ ချစ်သူအတွက်ဘာမဆို ရင်ဆိုင်ချင်တတ်ကြပါတယ်။ချစ်သူအတွက် မိသားစု ကိုတောင်စွန့်လွှတ် အဆက်သွယ်ဖြတ် ရဲတာ တနင်္ဂနွေသမီးတွေပါပဲ တနင်္ဂနွေ သမီးများကျတော့ အစွဲ အလန်းကြီးတတ်ကြပြီး ကိုယ့်ချစ်သူရဲ့စန်းပွင့်မှုကြောင့် စိတ်အနှောက်အယှက်ဖြစ်ရတတ်ပါတယ်။ တနင်္ဂနွေသားများကတော့ အရမ်းဂရုစိုက်တဲ့ စတိုင်တွေပြတတ်တယ် ။ ကွယ်သွားတာနဲ့ မေ့ရော။ ကွယ်မေ့ တွေ့သေအောင်လွမ်းဆိုတာ တနင်္ဂနွေ သားတွေပဲ
အချစ်အတွက်ပေးဆပ်ရဲတယ်။ တကယ်ချစ်လာရင်ဘာမှ မမြင်အားလုံးကို စွန့်လွတ်ရင်ဆိုင်ရဲတယ်။ အဆင့်အတန်းမူလည်း ဂရုမစိုက် ။ ချစ်သူအပြစ်ကိုလဲ ခွင့်လွှတ်တတ်တယ်။ ဒါပေမဲ့ စိတ်မရှည်တတ်ဘူး။ စတ်ဆပ်တတ်ပါတယ်။စိတ်ကောက်တတ်ပါတယ်။ အချော့ ကြိုက်တတ်ပါတယ် ။တနင်္လာနဲ့ ကြိုက်ရင်တော့ သူစိတ်ကောက်တာ ချော့ဖို့သာပြင်ထားတော့ ။
စိတ်အပြောင်းလဲ များတတ်တယ်။ သူကတော့ မ စ ဘူး ။ သူကို စ လာရင်ပါသွားတတ်ပါတယ်။အရမ်းကြင်နာတတ်သလို တစ်ခါ အလုပ်များ ချင်ယောင် ဆောင်ပြီး ဖုန်း မဆက်ပဲလုပ်နေတတ်ပါတယ်။စိတ်ကူးရင်ပြီး လေထဲမှာ တိုက်အိမ်ဆောင်နေတာ မပြီးတော့ဘူး။ အပြင်မှာ လက်တွေ့မှာ မိသားစု ကိစ္စ တွေနဲ့ ပဲ အချိန်ကုန်နေတယ်။ သူ့စိတ်ထဲမှာ မိသားစုက ပထမ ။ ချစ်သူက ဒုတိယ ပဲ ။ သူနဲ့ကြိုက်မိရင်တော့ သူမိသာစု အပေါ် မပြစ်မပြောလေနဲ့ ပြောရင် ကွဲသွားတတ်တယ်။ သူမိသားစု အပေါ် ဖေါ်လို လိုက်ပြီး ဆက်ဆံ နိုင်အောင်သာကြိုးစားတော့ ။
အပြောကောင်းတယ်။ ချစ်သူအတွက် ကူညီဖို့ ၀န်မလေးဘူး ။ ဒါပေမဲ့ တစ်ယောက်ထက်ပိုပြီး ထားချင်တတ်တယ် ။ များသောအားဖြင့် အခွင့်ရေး ရရင် အကုန်ယူ အကုန်ပေး ချင်တတ်တယ် ။အချစ်အတွက် အလုပ်ကိုတောင်ဖျက်ပြီး လိုက်လျှောတတ်ကြတယ် ။ ဒါပေမဲ့ ပတ်ဝန်ကျင်စကားကြောင့် ကိုယ့်ချစ်သူကို ဖြတ်ပစ်ချင်တာ သူတို့ရဲ့ စရိုက်ပါ။ ကိုယ့်အတွေးနဲ့ ကိုယ် ချစ်သူအပေါ် သံသယဖြစ်နေတတ်တယ်။ချစ်သူအပေါ်အပြောကတော့ ကောင်းပေမဲ့တကယ်လက်တွေ့မှာဘာမှ ဖြစ်ဖြစ်မြောက်မြောက်မလုပ်ပေးနိုင်တတ်ကြပါဘူး။သူတို့နဲ့ကြိုက်ရင်တော့ သတိထားပါ ။ လက်ထပ်ဖို့ လက်တွန့် ရက်ရွှေ့ဆိုင်းနေတတတ်တာ ကြာသပတေးသားသမီးတွေပါပဲ ဗျာ
အချစ်ရေးမှာ ကိုယ်က ပေးဆပ်သော်လည်း ပေးတိုင်းပြန်မရတတ်တာသောကြာ သားသမီးပါ။ကိုယ်က တကယ်ချစ်သောလည်း နုတ်ကြောင့်သေဆိုသလိုပဲ အပြောကြောင့် ဒုက္ခ ဖြစ်ဖြစ်နေတတ်တာသူတို့ ကံပေါ့ ။ တကယ်ဖြစ်ချင်နေတာ က တစ်ခု တကယ်ပြော ထွက်သွားတာ က တစ်ခုဖြစ်နေတတ်ပါတယ် ။ အချစ်ရေးမှာ မေတ္တာ တရားကြီးတတ်ပြီး အစွဲ အလန်းလည်း ကြီးတတ်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ခံစားလွယ်တတ်ကြပါတယ်။ သူတို့ကတော့ အချစ်ရေးမှာ ချစ်သူနဲ့ အဆင်ပြေပြီ ဆိုရင် ပတ်ဝန်းကျင် နှောက်ယှက်မှု ပယောဂ မကြာမကြာ တွေ့ကြုတတ်တာ သူတို့ ရဲ့ ကံပါပဲ ။ များသောအားဖြင့် သောကြာအများစုဟာ ရည်းစားဦး နဲ့လွဲ လွဲ သွားတတ်ကြပါတယ်။သူတို့နဲ့ ကြိုက်ရင်တော့ ရည်းစားဦးပါဆိုရင်တော့ သတိထားတော့
အချစ်ကြီးတယ်။ သံယောဇဉ်ကြီး တယ်။ ချစ်သူ ဖေါက်ပြန်ရင်တောင် ခွင့်လွတ်နိုင်တတ်တယ် ။ အပြောကောင်းတယ်။ သဘောကောင်းတယ်။သ၀န်တိုတတ်တယ်။ သူများ ထက်ပိုပြီး သ၀န်တို တတ်တယ် ။ ကိုယ်ကတော့ မစဘူး ။ ကိုယ့်ကို စ လာရင် ပါပါ သွားတတ်ပါတယ်။ လက်သာ ရင် လိုက်တဲ့ကလေး လိုပဲ ။ပိုဂရုစိုက်တဲ့ သူနောက် ပါ ပါ သွားတတ်ကြတာ စနေသားသမီးပါပဲ စနေနဲ့ ကြိုက်ရင်တော့ ပိုဂရုစိုက်နိုင်အောင်သာ ကြိုးစားပေတော့ နောက်တစ်ခု က စနေသားသမီးက ကြာရင် ငြီးငွေ့သွားတတ်ကြတယ် ။စနေသားသမီး နဲ့ တစ်နှစ်ကျော် ၂ နှစ်လောက်သမီးရည်းစားဖြစ်ပြီး ရင်ယူချင်စိတ်လျှော့သွားတတ်ကြတယ်။ အဲဒီတော့ စနေသားသမီး နဲ့ ကြိုက်ရင် တစ်နှစ်အတွင်းယူဖို့သာလုပ် နို့မို့ဆို မယူဖြစ်ပဲ ဇာတ်မြောဖြစ်သွား တတ်ပါ တယ်။
တနင်ျဂနှေ သားသမီး …
အရမျးခဈြတတျပါတယျ။ သို့သျော နှဈယောကျပွိုငျတူ ထားခငျြတတျတယျ။ သူတို့အတှေးတော့အခဈြဆိုတာ တဈယောကျထဲနဲ့ပွီးရမှာလား။
အခဈြဆိုတာပေးလို့ကုနျသှားတဲ့အရာမှမဟုတျတာနျော….လို့မြားသောအားဖွငျ့ခံယူထားတတျကွတယျအခွအေနပေေးရငျတဈယောကျထကျပိုရတတျယူတတျပါတယျသူမြားအထငျကွီးလေးစားအောငျပွောဆိုတတျကွပါတယျသူတို့နဲ့စကားပွောပွီးရငျသူတို့ ကိုအထငျကွီးလေးစားသှားတတျကွပါတယျ။ တကယျတမျးကတြော့ အပွောတဈမြိုးအလုပျတဈမြိုးဖွဈတတျပါတယျ။ အမြိုးသားမြားဆို ဇှတျ အတငျးခဈြရေးဆိုတတျတယျ
အမြိုးသမီးမြားကတြော့ ပှငျ့လငျးတယျ၊ ခဈြသူအတှကျဘာမဆို ရငျဆိုငျခငျြတတျကွပါတယျ။ခဈြသူအတှကျ မိသားစု ကိုတောငျစှနျ့လှတျ အဆကျသှယျဖွတျ ရဲတာ တနင်ျဂနှသေမီးတှပေါပဲ တနင်ျဂနှေ သမီးမြားကတြော့ အစှဲ အလနျးကွီးတတျကွပွီး ကိုယျ့ခဈြသူရဲ့စနျးပှငျ့မှုကွောငျ့ စိတျအနှောကျအယှကျဖွဈရတတျပါတယျ။ တနင်ျဂနှသေားမြားကတော့ အရမျးဂရုစိုကျတဲ့ စတိုငျတှပွေတတျတယျ ။ ကှယျသှားတာနဲ့ မရေ့ော။ ကှယျမေ့ တှသေ့အေောငျလှမျးဆိုတာ တနင်ျဂနှေ သားတှပေဲ
အခဈြအတှကျပေးဆပျရဲတယျ။ တကယျခဈြလာရငျဘာမှ မမွငျအားလုံးကို စှနျ့လှတျရငျဆိုငျရဲတယျ။ အဆငျ့အတနျးမူလညျး ဂရုမစိုကျ ။ ခဈြသူအပွဈကိုလဲ ခှငျ့လှတျတတျတယျ။ ဒါပမေဲ့ စိတျမရှညျတတျဘူး။ စတျဆပျတတျပါတယျ။စိတျကောကျတတျပါတယျ။ အခြော့ ကွိုကျတတျပါတယျ ။တနင်ျလာနဲ့ ကွိုကျရငျတော့ သူစိတျကောကျတာ ခြော့ဖို့သာပွငျထားတော့ ။
စိတျအပွောငျးလဲ မြားတတျတယျ။ သူကတော့ မ စ ဘူး ။ သူကို စ လာရငျပါသှားတတျပါတယျ။အရမျးကွငျနာတတျသလို တဈခါ အလုပျမြား ခငျြယောငျ ဆောငျပွီး ဖုနျး မဆကျပဲလုပျနတေတျပါတယျ။စိတျကူးရငျပွီး လထေဲမှာ တိုကျအိမျဆောငျနတော မပွီးတော့ဘူး။ အပွငျမှာ လကျတှမှေ့ာ မိသားစု ကိစ်စ တှနေဲ့ ပဲ အခြိနျကုနျနတေယျ။ သူ့စိတျထဲမှာ မိသားစုက ပထမ ။ ခဈြသူက ဒုတိယ ပဲ ။ သူနဲ့ကွိုကျမိရငျတော့ သူမိသာစု အပျေါ မပွဈမပွောလနေဲ့ ပွောရငျ ကှဲသှားတတျတယျ။ သူမိသားစု အပျေါ ဖျေါလို လိုကျပွီး ဆကျဆံ နိုငျအောငျသာကွိုးစားတော့ ။
အစှဲအလမျးကွီးတတျတယျ။ ဇှတျတရှတျလုပျတတျတယျ။ မကွိုကျခငျတော့မခုတျတတျတဲ့ ကွောငျလိုပဲ ။ ရညျးစားဖွဈပွီးသှားပွီ ဆိုရငျ ရှနေ့မေကွီးဖွဈသှားတော့တာပဲ ။ အလို မကြ မကွာခဏ စိတျတို စိတျဆပျဖွဈနေ တတျတယျ။ အခဈြရေးမှာ မြားသောအားဖွငျ့ သစ်စာရှိတတျပွီသူရဲ့ အပွောဆို မတတျမှုကွောငျ့ မကွာမကွာ စကားမြားမြားနရေတတျတယျ။ စိတျတိုပမေဲ့ ရငျထဲမှာတော့ အားငယျနကွေတတျပါတယျ။သူတို့နဲ့ ကွိုကျမိရငျတော့ သညျးခံ ခွငျး တရားကို လကျကိုငျထားပွီး အလိုလိုကျ အကွိုကျဆောငျပေးဖို့သာ ကွိုးစားတော့ ။
အပွောကောငျးတယျ။ ခဈြသူအတှကျ ကူညီဖို့ ၀နျမလေးဘူး ။ ဒါပမေဲ့ တဈယောကျထကျပိုပွီး ထားခငျြတတျတယျ ။ မြားသောအားဖွငျ့ အခှငျ့ရေး ရရငျ အကုနျယူ အကုနျပေး ခငျြတတျတယျ ။အခဈြအတှကျ အလုပျကိုတောငျဖကျြပွီး လိုကျလြှောတတျကွတယျ ။ ဒါပမေဲ့ ပတျဝနျကငျြစကားကွောငျ့ ကိုယျ့ခဈြသူကို ဖွတျပဈခငျြတာ သူတို့ရဲ့ စရိုကျပါ။ ကိုယျ့အတှေးနဲ့ ကိုယျ ခဈြသူအပျေါ သံသယဖွဈနတေတျတယျ။ခဈြသူအပျေါအပွောကတော့ ကောငျးပမေဲ့တကယျလကျတှမှေ့ာဘာမှ ဖွဈဖွဈမွောကျမွောကျမလုပျပေးနိုငျတတျကွပါဘူး။သူတို့နဲ့ကွိုကျရငျတော့ သတိထားပါ ။ လကျထပျဖို့ လကျတှနျ့ ရကျရှဆေို့ငျးနတေတတျတာ ကွာသပတေးသားသမီးတှပေါပဲ ဗြာ
အခဈြရေးမှာ ကိုယျက ပေးဆပျသျောလညျး ပေးတိုငျးပွနျမရတတျတာသောကွာ သားသမီးပါ။ကိုယျက တကယျခဈြသောလညျး နုတျကွောငျ့သဆေိုသလိုပဲ အပွောကွောငျ့ ဒုက်ခ ဖွဈဖွဈနတေတျတာသူတို့ ကံပေါ့ ။ တကယျဖွဈခငျြနတော က တဈခု တကယျပွော ထှကျသှားတာ က တဈခုဖွဈနတေတျပါတယျ ။ အခဈြရေးမှာ မတ်ေတာ တရားကွီးတတျပွီး အစှဲ အလနျးလညျး ကွီးတတျပါတယျ။ ဒါပမေဲ့ ခံစားလှယျတတျကွပါတယျ။ သူတို့ကတော့ အခဈြရေးမှာ ခဈြသူနဲ့ အဆငျပွပွေီ ဆိုရငျ ပတျဝနျးကငျြ နှောကျယှကျမှု ပယောဂ မကွာမကွာ တှကွေု့တတျတာ သူတို့ ရဲ့ ကံပါပဲ ။ မြားသောအားဖွငျ့ သောကွာအမြားစုဟာ ရညျးစားဦး နဲ့လှဲ လှဲ သှားတတျကွပါတယျ။သူတို့နဲ့ ကွိုကျရငျတော့ ရညျးစားဦးပါဆိုရငျတော့ သတိထားတော့
အခဈြကွီးတယျ။ သံယောဇဉျကွီး တယျ။ ခဈြသူ ဖေါကျပွနျရငျတောငျ ခှငျ့လှတျနိုငျတတျတယျ ။ အပွောကောငျးတယျ။ သဘောကောငျးတယျ။သဝနျတိုတတျတယျ။ သူမြား ထကျပိုပွီး သဝနျတို တတျတယျ ။ ကိုယျကတော့ မစဘူး ။ ကိုယျ့ကို စ လာရငျ ပါပါ သှားတတျပါတယျ။ လကျသာ ရငျ လိုကျတဲ့ကလေး လိုပဲ ။ပိုဂရုစိုကျတဲ့ သူနောကျ ပါ ပါ သှားတတျကွတာ စနသေားသမီးပါပဲ စနနေဲ့ ကွိုကျရငျတော့ ပိုဂရုစိုကျနိုငျအောငျသာ ကွိုးစားပတေော့ နောကျတဈခု က စနသေားသမီးက ကွာရငျ ငွီးငှသှေ့ားတတျကွတယျ ။စနသေားသမီး နဲ့ တဈနှဈကြျော ၂ နှဈလောကျသမီးရညျးစားဖွဈပွီး ရငျယူခငျြစိတျလြှော့သှားတတျကွတယျ။ အဲဒီတော့ စနသေားသမီး နဲ့ ကွိုကျရငျ တဈနှဈအတှငျးယူဖို့သာလုပျ နို့မို့ဆို မယူဖွဈပဲ ဇာတျမွောဖွဈသှား တတျပါ တယျ။
(၇) ရက်သားသ္မီးများ၏ စိတ်နေစိတ်ထားများ
၇ ရက်သားသ္မီးများ ၏ စိတ်နေစိတ်ထားများ ?
❝ ပုံ​လေး​တွေကို ​ကြည့်​​ပေးပါ။ ပုံ နှင့်​သက်​ဆိုင်​​သော ၇ ရက်သားသ္မီးများ၏ စိတ်နေစိတ်ထားများကို ပုံ​လေးနဲ့အတူ တပါတည်း ​ရေးသား​ပါတယ်​ ခင်​ဗျာ။
မိသားစုအပေါ်တွေမှာလည်း သံယောဇဉ်ရှိတတ်သလိုဆွေမျိုးသားချင်းတွေကိုလည်း ချစ်တတ်ကြတယ်။
တနင်္ဂနွေများဟာ စိတ်ပြတ်သားသလောက် အစွဲအလန်းလည်းကြီးတတ်ပါတယ်။
ကိုယ်လိုချင်တဲ့ အရာကို သူများလက်ထဲကိုမရောက်စေချင်တာ တနင်္ဂနွေ ။
ဒါဆိုရင်ဒါပဲ မပြောင်းလဲတတ်ဘူး ခေါင်းနဲနဲမာတယ်။
အလုပ်လုပ်တဲ့ နေရာမှာ ကိုယ်ဖြစ်ချင်တဲ့နေရာကိုရောက်အောင်သွားတတ်တယ်။
တနင်္ဂနွေတွေဟာ အပြင်မှာ ပြတ်သားသလိုနေတတ်ကြပေမဲ့ ရင်ထဲမှာတော့ အစွဲအလန်းကြီးတတ်တဲ့ နေ့နာမ်များပဲဖြစ်တယ်။
လူတွေရဲ့စိတ်ကို စူးစမ်းလေ့လာတာက်ို ဝါသနာပါကြတယ်။
တနင်္ဂနွေများဟာ အားနေရင် သီချင်းနားထောင်တာတို့ သီချင်းဆိုတာတို့ ဝါသနာပါပီး စိတ်အေးလက်အေးနေရတာကို နှစ်သက်ကြတယ်
စကားပြောရင်တည်ငြိမ်စွာနဲ့ပြောဆိုတတ်ပီး စွဲဆောင်မှုရှိစွာနဲ့ပြောဆိုတတ်တဲ့အကျင့်လေးကိုပိုင်ဆိုင်ထားကြတာလည်း တနင်္ဂနွေပါ
တနင်္ဂနွေများရဲ့ အချစ်ရေးဟာတော့ချစ်ရတဲ့သူကိုအရမ်းချစ်ပေမဲ့ အနေဝေးနေကြတယ်။
မိတ်​​ဆွေတို့ ဖတ်ပြီး သ​ဘောကျ နှစ်​သက်​ရင်​ မိမိတို့ မိတ်​​ဆွေ များကိုလည်း ပြန်လည် ​ဝေမျှ ပေးကြပါဦး ခင်​ဗျာ —
တနင်္လာ သားသမီးတို့ရဲ့ စိတ်နေစိတ်ထားအကြောင်း
တနင်္လာတွေဟာ မိတ်ဆွေပေါများတယ် ။
ဒေါသထွက်တတ်ပေမဲ့ အပြင်မှာ ထုတ်ပီးအရမ်းမပွားပါဘူး။
အစွဲအလန်းကြီးပါတယ် တစ်ယောက်ဆိုတစ်ယောက်အပေါ်မှာဘဲ စွဲလမ်းနေတတ်တယ် ။
စကားပြောရင် ဆွဲဆောင်မှုရှိစွာနဲ့ပြောဆိုတတ်တာ တနင်္လာပါ။
ခင်ရတဲ့အပေါင်းအသင်းနဲ့ စကားပြောနေချိန် စိတ်ရှည်စွာနဲ့ စိတ်ဝင်တစားလက်ခံနားထောင်ပေးတတ်တယ်။
ကိုယ်ကိုတိုင်လည်း ပျော်ရွှင်စွာနဲ့နေတတ်သလို သူများကိုပျော်ရွှင်မှုတွေ တခါတရံဖန်တီးပေးတတ်တယ်။
တနင်္လာတွေက သူငယ်ချင်းတွေ မိတ်ဆွေတွေကိုမက်မောစွာနဲ့ခင်တွယ်တတ်တယ်။
တခါတလေတော့ အလုပ်လုပ်တဲ့နေရာမှာ ဖြစ်ချင်တာနဲ့ ဖြစ်သွားတာ နဲနဲလေးလွဲချော်နေတတ်တယ်။
တနင်္လာတွေဟာ ကိုယ့်ရဲ့ရှေ့မှာ စိတ်မကောင်းစရာတစ်ခုခုတွေ့မြင်ရရင်သနားတတ်တယ်။
သို့ပေမဲ့ ကိုယ်မကြိုက်တဲ့အရာဆိုရင်တော့ စိတ်လက်ပြတ်သားတယ် ။
ချစ်ဖို့ကောင်းတဲ့ စိတ်ထားလေးတွေ ပိုင်ဆိုင်ထားကြတာတနင်္လာပါ။
တနင်္လာတွေဟာ လူတစ်ယောက်ရဲ့ စိတ်ကို အတွင်းကျကျလေ့လာတတ်တယ်။
စကားပြောတဲ့နေရာမှာ ပွင့်လင်းမှုရှိတယ်။ကိုယ်မကြိုက်သောအရာတွေကိုပြောချင်တဲ့စကားရှိရင် အားမနာတမ်း တိုက်ရိုက်ပြောတတ်တာတနင်္လာပါ။
တနင်္လာတွေဟာမှန်နေရင် ဘာကိုမှဂရုမစိုက်ပဲနေသလောက် မှားနေရင်တော့ တောင်းပန်ဖို့လည်းဝန်မလေးတတ်ဘူး။
အပေါင်းအသင်းတွေကြားမှာလည်း ယုံကြည်မှုအပြည့်အဝ ရှိရှိနဲ့ နေတတ်တာတနင်္လာပါ။
အားနေတဲ့ အချိန်တွေမှာ စာဖတ်တာတွေ ဗဟုတုသတွေကိုလေ့လာရတာနှစ်သက်တဲ့နေ့နာမ်တွေပါ။
တနင်္လာရဲ့အချစ်ရေးကတော့ ချစ်သူရဲ့ချော့တာလေးကိုနှစ်သက်ပေမဲ့ ကိုယ်ကလိုက်ပီး ချော့နေရတဲ့အနေအထား���
မိတ်​​ဆွေတို့ ဖတ်ပြီး သ​ဘောကျ နှစ်​သက်​ရင်​ မိမိတို့ မိတ်​​ဆွေ များကိုလည်း ပြန်လည် ​ဝေမျှ ပေးကြပါဦး ခင်​ဗျာ
အင်္ဂါသား သမီးတုိ့ရဲ့ စိတ်နေစိတ်ထားအကြောင်း
အင်္ဂါတွေဟာ အပြင်ပန်းသဏ္ဍန်တည်ငြိမ်အေးဆေးစွာနဲ့နေတတ်ကြပေမဲ့ အင်မတန်မှာ ဒေါသကြီးတဲ့နေ့နာမ်တွေဖြစ်ကြတယ်။
ဒေါသဖြစ်ရင် အပြင်မှာပေါက်ကွဲကြတာထက် ပါးစပ်ကပူညံပူညံနဲ့ရေရွတ်နေတတ်ကြတယ်။
တည်ငြိမ်အေးချမ်းတဲ့ ပုံစံမျိုးပေမဲ့ တခါတလေ မိသားစုထဲမှာ ပေါကြောင်ကြောင်နိုင်တတ်ကြတယ်။
ကိုယ်လုပ်ရင် ကိုယ်အကောင်းလို့ထင်မြင်တတ်ကြတာအင်္ဂါ အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်လည်း ကြိုးစားတတ်ကြတယ်။
အပေါင်းအသင်း သူငယ်ချင်းတွေကြားမှာ အေးအေးဆေးဆေးနေတတ်ကြတာ အင်္ဂါပါ။
ကိုယ့်အပေါ်ကောင်းတဲ့လူဆိုရင် လွယ်လွယ်နဲ့မမေ့တတ်သလောက် ကို့အပေါ်မကောင်းတဲ့လူဆိုရင်တော့ တသက်လုံးပြန်လှည့်မကြည့်တတ်ကြဘူး။
အင်္ဂါတွေဟာတိရိစ္ဆာန်လေးတွေကို အသည်းယားစွာနဲ့ ချစ်တတ်ကြတယ်။
အိမ်မက်ထူးထူးဆန်းဆန်းတွေမက်ရင် သူငယ်ချင်းတွေကို သို့မဟုတ် မိသားစုထဲကလူတစ်ယောက်ယောက်ကို ပြန်လည်ပီးပြောပြချင်တတ်ကြတယ်။
ဝမ်းနည်းစရာ တစ်ခုခုနဲ့ကြုံရင်မျက်ရည်လွယ်တတ်ကြတာအင်္ဂါပါ တော်ရုံနဲ့မမေ့တတ်ကြဘူး သို့ပေမဲ့ မေ့ပီးသွားရင်လည်း သူမဟုတ်သလိုပဲ အသစ်တဖန်ပြန်စတတ်ကြတယ်။
်စကားပြောရင်လည်း သူများနားလည်အောင် ရှင်းလင်းစွာနဲ့ ပြောပြတတ်ကြတယ်။
သီချင်းအေးအေးလေးတွေဆို တည်ငြိမ်အေးချမ်းတဲ့နေရာမှာ တိုးတိုးတိတ်တိတ် နားကျပ်နဲ့နားထောင်နေရတာတွေကိုနှစ်သက်ကြတာအင်္ဂါပါ။
အင်္ဂါတွေဟာ အချစ်ရေးမှာတော့ တွေဝေနေတတ်ကြပါတယ်။ရှေ့တိုးရမလိုလို နောက်ဆုတ်ရမလိုလိုနဲ့ သံယောဇဉ်လည်း မပြတ်နိုင်ကြဘူး ။
ဗုဒ္ဓဟူးသားသမီးများဟာ အေးဆေးစွာနဲ့ နေတတ်တဲ့နေ့နာမ်များပဲဖြစ်တယ်။
အပြင်မှာအေးသလောက် အပေါင်းအသင်းတွေနဲ့တွေ့ရင်တော့ ပျော်ပျော်နေတတ်တယ်။
ဗုဒ္ဓဟူးများဟာ ကိုယ်လုပ်တဲ့အလုပ်တစ်ခုကိုလုပ်မယ်လို့ဆုံးဖြတ်ထားရင် ဖြစ်အောင်ကို ကြိုးစားပီးလုပ်တတ်တာ ဗုဒ္ဓဟူးပါ။
ကိုယ်တကယ်ဝါသနာပါတဲ့အရာကိုလုပ်ရင်လည်း အောင်မြင်တတ်သလောက် စိတ်မပါတဲ့အရာဆိုရင်တော့ အောက်ဆုံးထိလက်လျော့ထားတတ်တယ်။
စိတ်ဆိုးအောင်လုပ်ပီးရင်လည်း ပြန်ချော့တတ်တာ ဗုဒ္ဓဟူး။
သူ့အပေါ်အလေးထားတဲ့သူဆိုရင် သူဟာအရမ်းကောင်းတယ် ။
ကိုယ့်ထက် အကြီးဖြစ်စေ အငယ်ဖြစ်စေကိုယ့်ထက်ဂရုစိုက်ပေးပီး ကိုယ့်ကိုပစ်ထားကြရင် ဝမ်းနည်းလွယ်တတ်တာဗုဒ္ဓဟူး။
ဗုဒ္ဓဟူးတွေဟာ စိတ်ကူးသစ် အမြင်သစ်နဲ့ မိတ်ဆွေအသစ်တွေကိုလည်း ရှာဖွေလေ့ရှိပါတယ်။
သို့ပေမဲ့ အဟောင်းကိုမေ့လားဆိုလည်း အဟောင်းတွေကိုလည်းမမေ့တတ်ပါဘူး။
ကိုယ့်အပေါ်ကောင်းတဲ့သူဘက်ကို ပိုးပီးအလေးထားဆက်ဆံတယ်။ ဗုဒ္ဓဟူးတွေဟာ ကိုယ့်ကိုယုံအောင်လာပြောရင်လည်းအယုံလွယ်တတ်တယ်။
ဗုဒ္ဓဟူးများဟာ ဒေါသဖြစ်ရင်လည်း မျက်ရည်တွေပေါက်ပေါက်ကျတယ်။
ဝမ်းနည်းမှုဖြစ်စေ ဒေါသဖြစ်စေ ဖြစ်လာရင်လည်း စိတ်ထဲမှာ အကြာကြီးအစွဲမထားတတ်တာ ဗုဒ္ဓဟူးပါ။
ဗုဒ္ဓဟူးများဟာ အားနေရင် ခင်မင်ရတဲ့သူတွေကို ဟာသပြောရတာတွေ သီချင်းနားထောင်တာတို့သို့မဟုတ် game တွေဆော့ရတာကိုဝါသနာပါတယ်။
ကိုယ်တကယ်ချစ်ရတဲ့သူနဲ့ဝေးနေရင် သူကမလာရင် ကိုယ်ကသူ့ဆီကို အရောက်သွားချင်တတ်ကြတဲ့စိတ်ထား ဗုဒ္ဓဟူးမှာရှိတယ်။
�ဗုဒ္ဓဟူး�တွေရဲ့ အချစ်ရေးကတော့ ကိုယ့်ရဲ့ တော့ကီတွေကြောင့်စန်းအလွန်ပွင့်သလို တခါတလေ ကိုယ်ပဲခံစားနေရတာ ဗုဒ္ဓဟူး ??
ခွင့်လွတ်သီးခံတတ်ကြပါတယ် ဒါကြောင့် လူတွေရဲ့ချစ်ခင်မှုက်ိုလည်းတာရှည်ပ်ိုင်ဆိုင်ထားကြတယ်။
မိသားစုထဲမှာ စကားများရန်ဖြစ်ကြရင်လည်း ကိုယ့်ဘက်ကအရင်ဆုံးကျေအေးပေးတတ်ကြတယ်။
ကိုယ့်မိသားစုထဲကလူတစ်ယောက်ယောက်ကို သံယောဇဉ်ရှိရှိနဲ့ ချစ်တတ်ပါတယ်။
ကိုယ်ဖြစ်ချင်သောဆန္ဒကို အလွယ်တကူလက်မလျော့တတ်တာ ကြာသပတေးပါ။
ဖြစ်ချင်တာကို စိတ်မလောဘဲ အချိန်ပေးပီးအကောင်အထည်ဖော်တတ်တယ် အေးဆေးနေတတ်တယ် စိတ်တည်စွာနဲ့နေတတ်တာကြာသပတေးပါ။
ကြာသပတေးဟာ တကယ်ခံစားလွယ်တဲ့သူများဖြစ်ကြပေမဲ့ အပြင်မှာတော့ တည်ငြိမ်စွာနဲ့နေတတ်တယ်။
ငိုချင်လာခဲ့ရင်တောင် အပြင်မှာတခြုံးခြုံးနဲ့ငိုနေတာထက် ရင်ထဲမှာ ကျိတ်ပီးခံစားတတ်ကြတယ်။
ရင်ထဲမှာသိမ်းမထားနိုင်တဲ့အပူဆိုရင်တော့ ဘာမှမပြောဘဲ မျက်ရည်တွေ အလိမ့်လိမ့်ကျလာတတ်တာ ကြာသပတေးပါ။
ကြာသပတေးများဟာ သူငယ်ချင်းတွေကြားမှာ ပျော်ရွှင်စွာနဲ့လည်းနေထိုင်တတ်တယ်။
ကြာကြာနေမှတွေ့ဖြစ်တဲ့သူငယ်ချင်းများကိုလည်း အတိတ်မှာ ပျော်ရွှင်ခဲ့တာတွေကိုပြန်ပီးပြောပြတတ်တဲ့စိတ်တွေလည်း ရှိတတ်ကြပါတယ်
အမှတ်တရတခုခုကို လွယ်လွယ်နဲ့မမေ့တတ်တာ ကြာသပတေးပါ။
တခါတရံ ကိုယ်ဝါသနာပါနေတဲ့အလုပ်ကိုလုပ်နေပီဆိုရင် အိမ်မက်ထဲမှာတောင် ထည့်မက်ကြတာ ကြာသပတေးပါ။
ကြာသပတေး သားသမီးများဟာ သူများတွေရဲ့ ခင်မင်မှုကိုလည်းတန်ဖိုးထားတတ်ကြတယ်။
အားနာတတ်တယ် စကားပြောတဲ့နေရာမှာလည်း အမှားကိုဆင်ခြင်သုံးသပ်ပီးပြောကြားနိုင်စွမ်းရှိတယ်။
အားနေတဲ့အချိန်တွေမှာဆိုရင်တော့ တခါတလေ မိသားစုကိုအချိန်ပေးပီး အိမ်တွင်းမှုလုပ်နေရရင်ကိုနှစ်သက်ကြပါတယ်။
ကြာသပတေးဟာ အပြင်ကရုပ်သွင် မဟုတ်ရင်တောင် အတွင်းစိတ်ချစ်စရာကောင်းတာလေးကို ပိုင်ဆိုင်ထားကြတယ်။
�ကြာသပတေးရဲ့ အချစ်ရေးကတော့ တစ်ယောက်ဆိုတစ်ယောက်အပေါ်မှာဘဲ အစွဲအလန်းရှိနေပါတယ်။
သူအဝေးမှာရှိနေရင်တောင် ပြန်လာဖို့ သစ္စာရှိစွာနဲ့ မေတ္တာမပျက်စောင့်မျှော်နေပါတယ် ���
သောကြာသားသမီးတွေဟာ လူ့လောကကိုစရောက်ပီဆိုကတည်းက အငိုသန်တယ် သွေးအေးအေးနဲ့စိတ်ကြီးတတ်တယ်။
အနေအေးတဲ့ လူအများစုဖြစ်ကြပေမဲ့ ကိုယ်ခင်ရတဲ့သူ အရင်းနှီးဆုံးလူတွေနဲ့ စကားပြောရင်တော့ အင်မတန်မှစကားများတယ်။
ကိုယ်မကြိုက်သောအရာ ကိုယ်မနှစ်သက်သောလူတွေဆိုရင်တော့ ဘယ်တော့မှ ဂရုမစိုက်တတ်ဘူး။
လူမှုရေး နဲ့ပတ်သတ်ပီး ဆက်ဆံရင် ဖော်ရွေတတ်တာသောကြာပါ။
ကိုယ်ခင်သောမိတ်ဆွေတွေရဲ့ လူမှုရေးပွဲတွေအတွက်ဆိုရင် သောကြာတွေဟာ မပျက်မကွက်သွားရောက်တတ်ပါတယ်။
အပြင်မှာအေးစက်စက်နဲ့မာနကြီးတယ်လို့ထင်ရပေမဲ့ ကိုယ်ခင်တဲ့လူတွေအပေါ်မှာဆိုရင်တော့ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းနဲ့ ပြောဆို ဆက်ဆံတတ်တာသောကြာပါ။
စိတ်ညစ်စရာ စိတ်ဆင်းရဲစရာတွေရှိရင် တစ်ယောက်ထဲအေးဆေး တွေးတောနေရတာကိုပိုပီးနှစ်သက်တာသောကြာ။
သောကြာတွေဟာ ကိုယ့်အနားမှာရှိနေတဲ့သူတွေကို အရင်းနီးဆုံး ခင်မင်စွာနေတတ်ပေမဲ့ စိတ်ထဲမှာသိပ်ပီးအစွဲအလန်းမထားတတ်ဘူး။
ခင်မင်ရတဲ့ လူအချို့ကို အချိန်တွေကြာသွားလည်း အမှတ်ရနေတတ်တဲ့သူတွေဖြစ်ပေမဲ့ အစွဲအလန်းကြီးစွာနဲ့သတတနဲ့သတိရနေတတ်တဲ့လူတွေတော့မဟုတ်ဘူး။
သောကြာတွေဟာ အားနေရင် ကိုယ်ကြိုက်သော အစားအစာတွေ စားနေရတာတွေကို ကျေနပ်ကြသလို အအိပ်လည်းမက်တယ်။
ဖြစ်ချင်တာတွေ မဖြစ်လာရင်လည်း ဒေါကန်တတ်တာသောကြာ။
ကိုယ့်ရဲ့အချစ်ရေးအချစ်ရာအကြောင်းတွေကို သူငယ်ချင်းတွေအပေါ်မှာ အကြောင်းစုံသိပ်ပီးပြောပြလေ့မရှိဘူး။
လျို့ဝှက်တတ်တာ သိပ်တော်တာ သောကြာပါ။
သောကြာတွေဟာ ပစ္စုပ္ပန်ထက် အနာဂတ်ကိုပိုပီးစိတ်ကူးယဉ်တွေးတောလေ့ရှိတယ်။
သောကြာတွေရဲ့မျက်ဝန်းဟာ စွဲဆောင်မှုရှိသလို စကားပြောရင်လည်း စွဲဆောင်မှုအပြည့်အဝပိုင်ဆိုင်ထားတာသောကြာတွေပါ။
��� သောကြာ ���
သောကြာ� တွေရဲ့အချစ်ရေးကတော့အချစ်ဦးနဲ့လွဲနေပေမဲ့ အချစ်စစ်နဲ့ရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့နေရတဲ့အနေအထားလေးပါ �
စနေသား သမီးတို့ရဲ့ စိတ်နေစိတ်ထားအကြောင်း
စနေသားသမီးတွေက လူ့ဘဝကိုစရောက်ပီဆိုကတည်းက စိတ်ကြီးတတ်ကြပါတယ်။
ဒေါသဖြစ်ပီဆိုရင်လည်း အရာဝတ္ထုတခုခုနဲ့ ကိုယ့်အသားကိုနာကျင်အောင်လုပ်တတ်တယ်။
ပြောချင်တဲ့စကားကို သွယ်ဝိုက်မပြောတတ်ဘဲ တိုက်ရိုက်ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းပြောတတ်တာ စနေပါ။
ဒေါသကြီးရင်လည်း သူများနဲ့မတူအောင်ပါပဲ စိတ်ကြီးတယ်မဟုတ်မခံတတ်ဘူး ။
အချိန်ခနလေးနဲ့ဒေါသအရမ်းထွက်တတ်ပေမဲ့ ဟုန်းခနဲထတောက်တဲ့မီးလိုပဲ ဒေါသတွေကခနပဲ ကြာကြာတော့စိတ်ထဲမထားတတ်ဘူး။
ကိုယ့်ရှေ့မှာ သတ္တဝါတွေမြင်ရင် ချစ်တတ်တယ်။
မျက်နှာတည်ပီး ရင်ထဲမှာတော့ တကယ်ခင်တတ်တဲ့စိတ်ထားစနေမှာအပြည့်အဝရှိတယ်။
သူငယ်ချင်းတွေရဲ့ အချစ် ခင်မင်မှုတွေကိုလည်းလိုချင်ကြတယ်။
မိသားစုတွေရဲ့ ဂရုစိုက်မှုကိုလည်းခံချင်ကြတာလည်း စနေပါ။
ပြောပီးရင်လည်း အကြောင်းတခုကို အပြန်ပြန်အလှန်လှန်စဉ်းစားတတ်ပီး စိတ်မကောင်းဖြစ်နေတတ်တာလည်းစနေပါဘဲ။
ချစ်သူနဲ့ဖြစ်ဖြစ် သူငယ်ချင်းနဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်ရန်ဖြစ်ပီးမခေါ်ကြရင် ကိုယ်ကဘယ်တော့မှအရင်စမခေါ်ချင်ကြဘူး မာနအိုးတွေပါ။
ခင်ရတဲ့သူတွေကို ကိစ္စတွေတိုင်း မပြောပြတတ်ဘူး။
ကိုယ်လုပ်တဲ့ကိစ္စတွေတိုင်းကိုလက်ကြောတင်းအောင် အကောင်းဆုံး လုပ်ကြပါတယ် ။
ကိုယ်လုပ်ထားတဲ့အရာတွေကို အကောင်းပြောတာဘဲ ခံချင်ကြတာလည်းစနေပဲ။
အချစ်ရေးမှာတော့ ကိုယ့်ချစ်သူရဲ့မြတ်နိုးမှု အချစ်တွေကိုခံရပေမဲ့ ခေတ္တယာယီတော့ ဝေးနေတတ်ကြတယ် ���
မိသားစုအပျေါတှမှောလညျး သံယောဇဉျရှိတတျသလိုဆှမြေိုးသားခငျြးတှကေိုလညျး ခဈြတတျကွတယျ။
တနင်ျဂနှမြေားဟာ စိတျပွတျသားသလောကျ အစှဲအလနျးလညျးကွီးတတျပါတယျ။
ကိုယျလိုခငျြတဲ့ အရာကို သူမြားလကျထဲကိုမရောကျစခေငျြတာ တနင်ျဂနှေ ။
ဒါဆိုရငျဒါပဲ မပွောငျးလဲတတျဘူး ခေါငျးနဲနဲမာတယျ။
အလုပျလုပျတဲ့ နရောမှာ ကိုယျဖွဈခငျြတဲ့နရောကိုရောကျအောငျသှားတတျတယျ။
တနင်ျဂနှတှေဟော အပွငျမှာ ပွတျသားသလိုနတေတျကွပမေဲ့ ရငျထဲမှာတော့ အစှဲအလနျးကွီးတတျတဲ့ နနေ့ာမျမြားပဲဖွဈတယျ။
လူတှရေဲ့စိတျကို စူးစမျးလလေ့ာတာကျို ဝါသနာပါကွတယျ။
တနင်ျဂနှမြေားဟာ အားနရေငျ သီခငျြးနားထောငျတာတို့ သီခငျြးဆိုတာတို့ ဝါသနာပါပီး စိတျအေးလကျအေးနရေတာကို နှဈသကျကွတယျ
စကားပွောရငျတညျငွိမျစှာနဲ့ပွောဆိုတတျပီး စှဲဆောငျမှုရှိစှာနဲ့ပွောဆိုတတျတဲ့အကငျြ့လေးကိုပိုငျဆိုငျထားကွတာလညျး တနင်ျဂနှပေါ
တနင်ျဂနှမြေားရဲ့ အခဈြရေးဟာတော့ခဈြရတဲ့သူကိုအရမျးခဈြပမေဲ့ အနဝေေးနကွေတယျ။
မိတျ​​ဆှတေို့ ဖတျပွီး သ​ဘောကြ နှဈ​သကျ​ရငျ​ မိမိတို့ မိတျ​​ဆှေ မြားကိုလညျး ပွနျလညျ ​ဝမြှေ ပေးကွပါဦး ခငျ​ဗြာ —
တနင်ျလာ သားသမီးတို့ရဲ့ စိတျနစေိတျထားအကွောငျး
တနင်ျလာတှဟော မိတျဆှပေေါမြားတယျ ။
ဒေါသထှကျတတျပမေဲ့ အပွငျမှာ ထုတျပီးအရမျးမပှားပါဘူး။
အစှဲအလနျးကွီးပါတယျ တဈယောကျဆိုတဈယောကျအပျေါမှာဘဲ စှဲလမျးနတေတျတယျ ။
စကားပွောရငျ ဆှဲဆောငျမှုရှိစှာနဲ့ပွောဆိုတတျတာ တနင်ျလာပါ။
ခငျရတဲ့အပေါငျးအသငျးနဲ့ စကားပွောနခြေိနျ စိတျရှညျစှာနဲ့ စိတျဝငျတစားလကျခံနားထောငျပေးတတျတယျ။
ကိုယျကိုတိုငျလညျး ပြျောရှငျစှာနဲ့နတေတျသလို သူမြားကိုပြျောရှငျမှုတှေ တခါတရံဖနျတီးပေးတတျတယျ။
တနင်ျလာတှကေ သူငယျခငျြးတှေ မိတျဆှတှေကေိုမကျမောစှာနဲ့ခငျတှယျတတျတယျ။
တခါတလတေော့ အလုပျလုပျတဲ့နရောမှာ ဖွဈခငျြတာနဲ့ ဖွဈသှားတာ နဲနဲလေးလှဲခြျောနတေတျတယျ။
တနင်ျလာတှဟော ကိုယျ့ရဲ့ရှမှေ့ာ စိတျမကောငျးစရာတဈခုခုတှမွေ့ငျရရငျသနားတတျတယျ။
သို့ပမေဲ့ ကိုယျမကွိုကျတဲ့အရာဆိုရငျတော့ စိတျလကျပွတျသားတယျ ။
ခဈြဖို့ကောငျးတဲ့ စိတျထားလေးတှေ ပိုငျဆိုငျထားကွတာတနင်ျလာပါ။
တနင်ျလာတှဟော လူတဈယောကျရဲ့ စိတျကို အတှငျးကကြလြလေ့ာတတျတယျ။
စကားပွောတဲ့နရောမှာ ပှငျ့လငျးမှုရှိတယျ။ကိုယျမကွိုကျသောအရာတှကေိုပွောခငျြတဲ့စကားရှိရငျ အားမနာတမျး တိုကျရိုကျပွောတတျတာတနင်ျလာပါ။
တနင်ျလာတှဟောမှနျနရေငျ ဘာကိုမှဂရုမစိုကျပဲနသေလောကျ မှားနရေငျတော့ တောငျးပနျဖို့လညျးဝနျမလေးတတျဘူး။
အပေါငျးအသငျးတှကွေားမှာလညျး ယုံကွညျမှုအပွညျ့အဝ ရှိရှိနဲ့ နတေတျတာတနင်ျလာပါ။
အားနတေဲ့ အခြိနျတှမှော စာဖတျတာတှေ ဗဟုတုသတှကေိုလလေ့ာရတာနှဈသကျတဲ့နနေ့ာမျတှပေါ။
တနင်ျလာရဲ့အခဈြရေးကတော့ ခဈြသူရဲ့ခြော့တာလေးကိုနှဈသကျပမေဲ့ ကိုယျကလိုကျပီး ခြော့နရေတဲ့အနအေထား���
မိတျ​​ဆှတေို့ ဖတျပွီး သ​ဘောကြ နှဈ​သကျ​ရငျ​ မိမိတို့ မိတျ​​ဆှေ မြားကိုလညျး ပွနျလညျ ​ဝမြှေ ပေးကွပါဦး ခငျ​ဗြာ
အင်ျဂါသား သမီးတို့ရဲ့ စိတျနစေိတျထားအကွောငျး
အင်ျဂါတှဟော အပွငျပနျးသဏ်ဍနျတညျငွိမျအေးဆေးစှာနဲ့နတေတျကွပမေဲ့ အငျမတနျမှာ ဒေါသကွီးတဲ့နနေ့ာမျတှဖွေဈကွတယျ။
ဒေါသဖွဈရငျ အပွငျမှာပေါကျကှဲကွတာထကျ ပါးစပျကပူညံပူညံနဲ့ရရှေတျနတေတျကွတယျ။
တညျငွိမျအေးခမျြးတဲ့ ပုံစံမြိုးပမေဲ့ တခါတလေ မိသားစုထဲမှာ ပေါကွောငျကွောငျနိုငျတတျကွတယျ။
ကိုယျလုပျရငျ ကိုယျအကောငျးလို့ထငျမွငျတတျကွတာအင်ျဂါ အကောငျးဆုံးဖွဈအောငျလညျး ကွိုးစားတတျကွတယျ။
အပေါငျးအသငျး သူငယျခငျြးတှကွေားမှာ အေးအေးဆေးဆေးနတေတျကွတာ အင်ျဂါပါ။
ကိုယျ့အပျေါကောငျးတဲ့လူဆိုရငျ လှယျလှယျနဲ့မမတေ့တျသလောကျ ကို့အပျေါမကောငျးတဲ့လူဆိုရငျတော့ တသကျလုံးပွနျလှညျ့မကွညျ့တတျကွဘူး။
အင်ျဂါတှဟောတိရိစ်ဆာနျလေးတှကေို အသညျးယားစှာနဲ့ ခဈြတတျကွတယျ။
အိမျမကျထူးထူးဆနျးဆနျးတှမေကျရငျ သူငယျခငျြးတှကေို သို့မဟုတျ မိသားစုထဲကလူတဈယောကျယောကျကို ပွနျလညျပီးပွောပွခငျြတတျကွတယျ။
ဝမျးနညျးစရာ တဈခုခုနဲ့ကွုံရငျမကျြရညျလှယျတတျကွတာအင်ျဂါပါ တျောရုံနဲ့မမတေ့တျကွဘူး သို့ပမေဲ့ မပေီ့းသှားရငျလညျး သူမဟုတျသလိုပဲ အသဈတဖနျပွနျစတတျကွတယျ။
ျစကားပွောရငျလညျး သူမြားနားလညျအောငျ ရှငျးလငျးစှာနဲ့ ပွောပွတတျကွတယျ။
သီခငျြးအေးအေးလေးတှဆေို တညျငွိမျအေးခမျြးတဲ့နရောမှာ တိုးတိုးတိတျတိတျ နားကပျြနဲ့နားထောငျနရေတာတှကေိုနှဈသကျကွတာအင်ျဂါပါ။
အင်ျဂါတှဟော အခဈြရေးမှာတော့ တှဝေနေတေတျကွပါတယျ။ရှတေို့းရမလိုလို နောကျဆုတျရမလိုလိုနဲ့ သံယောဇဉျလညျး မပွတျနိုငျကွဘူး ။
ဗုဒ်ဓဟူးသားသမီးမြားဟာ အေးဆေးစှာနဲ့ နတေတျတဲ့နနေ့ာမျမြားပဲဖွဈတယျ။
အပွငျမှာအေးသလောကျ အပေါငျးအသငျးတှနေဲ့တှရေ့ငျတော့ ပြျောပြျောနတေတျတယျ။
ဗုဒ်ဓဟူးမြားဟာ ကိုယျလုပျတဲ့အလုပျတဈခုကိုလုပျမယျလို့ဆုံးဖွတျထားရငျ ဖွဈအောငျကို ကွိုးစားပီးလုပျတတျတာ ဗုဒ်ဓဟူးပါ။
ကိုယျတကယျဝါသနာပါတဲ့အရာကိုလုပျရငျလညျး အောငျမွငျတတျသလောကျ စိတျမပါတဲ့အရာဆိုရငျတော့ အောကျဆုံးထိလကျလြော့ထားတတျတယျ။
စိတျဆိုးအောငျလုပျပီးရငျလညျး ပွနျခြော့တတျတာ ဗုဒ်ဓဟူး။
သူ့အပျေါအလေးထားတဲ့သူဆိုရငျ သူဟာအရမျးကောငျးတယျ ။
ကိုယျ့ထကျ အကွီးဖွဈစေ အငယျဖွဈစကေိုယျ့ထကျဂရုစိုကျပေးပီး ကိုယျ့ကိုပဈထားကွရငျ ဝမျးနညျးလှယျတတျတာဗုဒ်ဓဟူး။
ဗုဒ်ဓဟူးတှဟော စိတျကူးသဈ အမွငျသဈနဲ့ မိတျဆှအေသဈတှကေိုလညျး ရှာဖှလေရှေိ့ပါတယျ။
သို့ပမေဲ့ အဟောငျးကိုမလေ့ားဆိုလညျး အဟောငျးတှကေိုလညျးမမတေ့တျပါဘူး။
ကိုယျ့အပျေါကောငျးတဲ့သူဘကျကို ပိုးပီးအလေးထားဆကျဆံတယျ။ ဗုဒ်ဓဟူးတှဟော ကိုယျ့ကိုယုံအောငျလာပွောရငျလညျးအယုံလှယျတတျတယျ။
ဗုဒ်ဓဟူးမြားဟာ ဒေါသဖွဈရငျလညျး မကျြရညျတှပေေါကျပေါကျကတြယျ။
ဝမျးနညျးမှုဖွဈစေ ဒေါသဖွဈစေ ဖွဈလာရငျလညျး စိတျထဲမှာ အကွာကွီးအစှဲမထားတတျတာ ဗုဒ်ဓဟူးပါ။
ဗုဒ်ဓဟူးမြားဟာ အားနရေငျ ခငျမငျရတဲ့သူတှကေို ဟာသပွောရတာတှေ သီခငျြးနားထောငျတာတို့သို့မဟုတျ game တှဆေော့ရတာကိုဝါသနာပါတယျ။
ကိုယျတကယျခဈြရတဲ့သူနဲ့ဝေးနရေငျ သူကမလာရငျ ကိုယျကသူ့ဆီကို အရောကျသှားခငျြတတျကွတဲ့စိတျထား ဗုဒ်ဓဟူးမှာရှိတယျ။
�ဗုဒ်ဓဟူး�တှရေဲ့ အခဈြရေးကတော့ ကိုယျ့ရဲ့ တော့ကီတှကွေောငျ့စနျးအလှနျပှငျ့သလို တခါတလေ ကိုယျပဲခံစားနရေတာ ဗုဒ်ဓဟူး ??
ခှငျ့လှတျသီးခံတတျကွပါတယျ ဒါကွောငျ့ လူတှရေဲ့ခဈြခငျမှုကျိုလညျးတာရှညျပျိုငျဆိုငျထားကွတယျ။
မိသားစုထဲမှာ စကားမြားရနျဖွဈကွရငျလညျး ကိုယျ့ဘကျကအရငျဆုံးကအြေေးပေးတတျကွတယျ။
ကိုယျ့မိသားစုထဲကလူတဈယောကျယောကျကို သံယောဇဉျရှိရှိနဲ့ ခဈြတတျပါတယျ။
ကိုယျဖွဈခငျြသောဆန်ဒကို အလှယျတကူလကျမလြော့တတျတာ ကွာသပတေးပါ။
ဖွဈခငျြတာကို စိတျမလောဘဲ အခြိနျပေးပီးအကောငျအထညျဖျောတတျတယျ အေးဆေးနတေတျတယျ စိတျတညျစှာနဲ့နတေတျတာကွာသပတေးပါ။
ကွာသပတေးဟာ တကယျခံစားလှယျတဲ့သူမြားဖွဈကွပမေဲ့ အပွငျမှာတော့ တညျငွိမျစှာနဲ့နတေတျတယျ။
ငိုခငျြလာခဲ့ရငျတောငျ အပွငျမှာတခွုံးခွုံးနဲ့ငိုနတောထကျ ရငျထဲမှာ ကြိတျပီးခံစားတတျကွတယျ။
ရငျထဲမှာသိမျးမထားနိုငျတဲ့အပူဆိုရငျတော့ ဘာမှမပွောဘဲ မကျြရညျတှေ အလိမျ့လိမျ့ကလြာတတျတာ ကွာသပတေးပါ။
ကွာသပတေးမြားဟာ သူငယျခငျြးတှကွေားမှာ ပြျောရှငျစှာနဲ့လညျးနထေိုငျတတျတယျ။
ကွာကွာနမှေတှဖွေ့ဈတဲ့သူငယျခငျြးမြားကိုလညျး အတိတျမှာ ပြျောရှငျခဲ့တာတှကေိုပွနျပီးပွောပွတတျတဲ့စိတျတှလေညျး ရှိတတျကွပါတယျ
အမှတျတရတခုခုကို လှယျလှယျနဲ့မမတေ့တျတာ ကွာသပတေးပါ။
တခါတရံ ကိုယျဝါသနာပါနတေဲ့အလုပျကိုလုပျနပေီဆိုရငျ အိမျမကျထဲမှာတောငျ ထညျ့မကျကွတာ ကွာသပတေးပါ။
ကွာသပတေး သားသမီးမြားဟာ သူမြားတှရေဲ့ ခငျမငျမှုကိုလညျးတနျဖိုးထားတတျကွတယျ။
အားနာတတျတယျ စကားပွောတဲ့နရောမှာလညျး အမှားကိုဆငျခွငျသုံးသပျပီးပွောကွားနိုငျစှမျးရှိတယျ။
အားနတေဲ့အခြိနျတှမှောဆိုရငျတော့ တခါတလေ မိသားစုကိုအခြိနျပေးပီး အိမျတှငျးမှုလုပျနရေရငျကိုနှဈသကျကွပါတယျ။
ကွာသပတေးဟာ အပွငျကရုပျသှငျ မဟုတျရငျတောငျ အတှငျးစိတျခဈြစရာကောငျးတာလေးကို ပိုငျဆိုငျထားကွတယျ။
�ကွာသပတေးရဲ့ အခဈြရေးကတော့ တဈယောကျဆိုတဈယောကျအပျေါမှာဘဲ အစှဲအလနျးရှိနပေါတယျ။
သူအဝေးမှာရှိနရေငျတောငျ ပွနျလာဖို့ သစ်စာရှိစှာနဲ့ မတ်ေတာမပကျြစောငျ့မြှျောနပေါတယျ ���
သောကွာသားသမီးတှဟော လူ့လောကကိုစရောကျပီဆိုကတညျးက အငိုသနျတယျ သှေးအေးအေးနဲ့စိတျကွီးတတျတယျ။
အနအေေးတဲ့ လူအမြားစုဖွဈကွပမေဲ့ ကိုယျခငျရတဲ့သူ အရငျးနှီးဆုံးလူတှနေဲ့ စကားပွောရငျတော့ အငျမတနျမှစကားမြားတယျ။
ကိုယျမကွိုကျသောအရာ ကိုယျမနှဈသကျသောလူတှဆေိုရငျတော့ ဘယျတော့မှ ဂရုမစိုကျတတျဘူး။
လူမှုရေး နဲ့ပတျသတျပီး ဆကျဆံရငျ ဖျောရှတေတျတာသောကွာပါ။
ကိုယျခငျသောမိတျဆှတှေရေဲ့ လူမှုရေးပှဲတှအေတှကျဆိုရငျ သောကွာတှဟော မပကျြမကှကျသှားရောကျတတျပါတယျ။
အပွငျမှာအေးစကျစကျနဲ့မာနကွီးတယျလို့ထငျရပမေဲ့ ကိုယျခငျတဲ့လူတှအေပျေါမှာဆိုရငျတော့ပှငျ့ပှငျ့လငျးလငျးနဲ့ ပွောဆို ဆကျဆံတတျတာသောကွာပါ။
စိတျညဈစရာ စိတျဆငျးရဲစရာတှရှေိရငျ တဈယောကျထဲအေးဆေး တှေးတောနရေတာကိုပိုပီးနှဈသကျတာသောကွာ။
သောကွာတှဟော ကိုယျ့အနားမှာရှိနတေဲ့သူတှကေို အရငျးနီးဆုံး ခငျမငျစှာနတေတျပမေဲ့ စိတျထဲမှာသိပျပီးအစှဲအလနျးမထားတတျဘူး။
ခငျမငျရတဲ့ လူအခြို့ကို အခြိနျတှကွောသှားလညျး အမှတျရနတေတျတဲ့သူတှဖွေဈပမေဲ့ အစှဲအလနျးကွီးစှာနဲ့သတတနဲ့သတိရနတေတျတဲ့လူတှတေော့မဟုတျဘူး။
သောကွာတှဟော အားနရေငျ ကိုယျကွိုကျသော အစားအစာတှေ စားနရေတာတှကေို ကနြေပျကွသလို အအိပျလညျးမကျတယျ။
ဖွဈခငျြတာတှေ မဖွဈလာရငျလညျး ဒေါကနျတတျတာသောကွာ။
ကိုယျ့ရဲ့အခဈြရေးအခဈြရာအကွောငျးတှကေို သူငယျခငျြးတှအေပျေါမှာ အကွောငျးစုံသိပျပီးပွောပွလမေ့ရှိဘူး။
လြို့ဝှကျတတျတာ သိပျတျောတာ သောကွာပါ။
သောကွာတှဟော ပစ်စုပ်ပနျထကျ အနာဂတျကိုပိုပီးစိတျကူးယဉျတှေးတောလရှေိ့တယျ။
သောကွာတှရေဲ့မကျြဝနျးဟာ စှဲဆောငျမှုရှိသလို စကားပွောရငျလညျး စှဲဆောငျမှုအပွညျ့အဝပိုငျဆိုငျထားတာသောကွာတှပေါ။
��� သောကွာ ���
သောကွာ� တှရေဲ့အခဈြရေးကတော့အခဈြဦးနဲ့လှဲနပေမေဲ့ အခဈြစဈနဲ့ရငျဆိုငျကွုံတှနေ့ရေတဲ့အနအေထားလေးပါ �
စနသေား သမီးတို့ရဲ့ စိတျနစေိတျထားအကွောငျး
စနသေားသမီးတှကေ လူ့ဘဝကိုစရောကျပီဆိုကတညျးက စိတျကွီးတတျကွပါတယျ။
ဒေါသဖွဈပီဆိုရငျလညျး အရာဝတ်ထုတခုခုနဲ့ ကိုယျ့အသားကိုနာကငျြအောငျလုပျတတျတယျ။
ပွောခငျြတဲ့စကားကို သှယျဝိုကျမပွောတတျဘဲ တိုကျရိုကျပှငျ့ပှငျ့လငျးလငျးပွောတတျတာ စနပေါ။
ဒေါသကွီးရငျလညျး သူမြားနဲ့မတူအောငျပါပဲ စိတျကွီးတယျမဟုတျမခံတတျဘူး ။
အခြိနျခနလေးနဲ့ဒေါသအရမျးထှကျတတျပမေဲ့ ဟုနျးခနဲထတောကျတဲ့မီးလိုပဲ ဒေါသတှကေခနပဲ ကွာကွာတော့စိတျထဲမထားတတျဘူး။
ကိုယျ့ရှမှေ့ာ သတ်တဝါတှမွေငျရငျ ခဈြတတျတယျ။
မကျြနှာတညျပီး ရငျထဲမှာတော့ တကယျခငျတတျတဲ့စိတျထားစနမှောအပွညျ့အဝရှိတယျ။
သူငယျခငျြးတှရေဲ့ အခဈြ ခငျမငျမှုတှကေိုလညျးလိုခငျြကွတယျ။
မိသားစုတှရေဲ့ ဂရုစိုကျမှုကိုလညျးခံခငျြကွတာလညျး စနပေါ။
ပွောပီးရငျလညျး အကွောငျးတခုကို အပွနျပွနျအလှနျလှနျစဉျးစားတတျပီး စိတျမကောငျးဖွဈနတေတျတာလညျးစနပေါဘဲ။
ခဈြသူနဲ့ဖွဈဖွဈ သူငယျခငျြးနဲ့ပဲဖွဈဖွဈရနျဖွဈပီးမချေါကွရငျ ကိုယျကဘယျတော့မှအရငျစမချေါခငျြကွဘူး မာနအိုးတှပေါ။
ခငျရတဲ့သူတှကေို ကိစ်စတှတေိုငျး မပွောပွတတျဘူး။
ကိုယျလုပျတဲ့ကိစ်စတှတေိုငျးကိုလကျကွောတငျးအောငျ အကောငျးဆုံး လုပျကွပါတယျ ။
ကိုယျလုပျထားတဲ့အရာတှကေို အကောငျးပွောတာဘဲ ခံခငျြကွတာလညျးစနပေဲ။
အခဈြရေးမှာတော့ ကိုယျ့ခဈြသူရဲ့မွတျနိုးမှု အခဈြတှကေိုခံရပမေဲ့ ခတ်ေတယာယီတော့ ဝေးနတေတျကွတယျ ���
23.11.2017 မှ 29.11.2017 အထိ တစ်ပတ်စာ
23.11.2017 မှ 29.11.2017 အထိ
မိမိကိုယ်သာ အားကိုးသင့်တဲ့ကာလပါ။ မိမိအတွေးအကြံမှတစ်ပါး တစ်ခြားလူဆီက အကြံဉာဏ်မတောင်းပါနှင့်။ ကူညီမဲ့သူထက် ဒုက္ခပေးမဲ့သူသာ အနားမှာ ဝန်းရံနေတတ်လို့ပါ။ မိမိစိတ်ကူးကြောင့် အောင်
မြင်မှုတွေ ရပါလိမ့်မည်။ ခရီးကိစ္စများကြန့်ကြာပြီးမှ လိုရာပန်းတိုင်ရောက်မည်။ လက်ရှိအလုပ်မှာ စိတ်ပါဝင်စားမှုအားနည်းခြင်း၊ အလုက်ထွက်ချင်စိတ်ဖြစ်ပေါ်နေတတ်ခြင်းများ ခံစားရမည်။ အထက်လူကြီးနှင့်အဆင်မပြေဖြစ်တတ်သည်။ ဘာသာရေးအပေါ်စိတ်ဝင်စားမှုအားနည်းနေတတ်သည်။နေ့စဉ်လုပ်နေကျ ကုသိုလ်အလုပ်တွေမလုပ်မိ ပျင်းရိနေတတ်သည်။ ပညာရေးကံအားနည်းနေသည်။ စာတွေမလိုက်နိုင်တာမျိုးကြုံတွေ့နိုင်သည်။ အချစ်ရေးကံကြမ္မာညံ့နေတုန်းပါပဲ ။ နှစ်ယောက်ကြား သွေးတိုးစကားတွေကိုယုံမိတတ်သည်။
ယတြာ …တနင်္ဂနွေထောင့်မှာ သပြေပန်းလှူပါ။
ငွေကြေးကဏ္ဍတစ်ခုကတော့ အားနည်းနေသည်။ ငွေပေးငွေယူ သတိရှိပါ။ ကြွေးယူကြွေးတောင်းမလုပ်ပါနဲ့။ လူမှုရေးအသင်းအဖွဲ့မှငွေများ မ်ိမိလက်ဝယ်ထားရှိခြင်းမျိုးလက်မခံပါနှင့်။ လာဘ်ပိတ်တတ်ပါတယ်။ အစားအသောက်ဆင်ခြင်ပါ။ ဝမ်းပျက်ဝမ်းလျော ဖြစ်တတ့်သည်။ လုပ်ငန်းစီးပွားတိုးတတ်နေပေမဲ့ လုပ်သလောက်အကျိုးအမြတ်နည်းနေတတ်သည်။ ကျန်းမာရေးကတော့ အထူးဂရုစိုက်စေချင်သည်။ အချစ်ရေးကံကတော့ မြင့်မားနေချိန်ပါပဲ။ ချစ်သူဆီက နားလည်မှုတွေ ကြင်နာမှုတွေရပါလိမ့်မည်။ ပညာရေးကံမြင့်နေပေမဲ့ မိမိအနေနဲ့ ကြိုးစားဖို့တော့ လိုပါသည်။ အာရုံစိုက်ထားမှ ပညာရပ်အပေါ်နားလည်လိမ့်မည်။ ဇိမ်ခံပစ္စည်းများ ဒီကာလအတွင်းမဝယ်ပါနဲ့။
အထူးဟော… လူပင်ပန်းနွမ်းချိ နေလိမ့်မည်။
ယတြာ… ရဟန်းတစ်ပါးအား ဖိနပ်လှူပါ။
ကံမြင့်မားနေမည်။ အဘက်ဘက်ကအဆင်ပြေလိမ့်မည်။ အကျိုးဖြစ်ထွန်းသော ကောင်းသောခရီးတွေသွားရတတ်သည်။အလုပ်စီးပွားတိုးတတ်နေလိမ့်မယ်။ ဒါကြောင့်ပဲကျွဲကူးရေပါဆိုသလို ငွေကံလဲမြင့်မားနေပါလိမ့်မယ်။ ငွေဝင်သလောက် ကုန်စရာတွေကလဲ များနေတတ်ပါတယ်။ လိုအပ်မှငွေသုံးပါ။ အလုပ်စီးပွားလုပ်ဖို့ ကမ်းလှမ်းတာမျိုးကြုံရရင် လက်ခံလိုက်ပါလို့ပြောချင်ပါတယ်။ ထီဝါသနာပါသူဆို ထီထိုးဖို့အကောင်းဆုံးအချိန်ပါပဲ။ မိမိအိမ်နဲ့ ဝေးတဲ့နေရာက ထီဆိုင်မှာ ထိုးပါ။ မိမိရဲ့စိတ်ကူးစိတ်သန်းတွေလဲ ကောင်းနေတတ်ပါတယ်။
ပညာရေးထက် အခြားအရာတွေကိုစိတ်ဝင်စားနေမိတဲ့ အချိန်ပါ။ အချစ်ရေးကံမကောင်းသေးပါ။ မိမိကိုယ်တိုင်ကလဲအချစ်ရေးအပေါ်စိတ်ဝင်စားမှု အားနည်းနေပါတယ်။
ယတြာ… အင်္ဂါထောင့်မှာ ထီးနီ ၃ လက်လှူပါ။
မိတ်ဆွေကံအားကောင်းနေတဲ့ အချိန်ပါ။ မိမိကိုကူညီမဲ့သူတွေ ဝိုင်းရံနေတတ်ပါသည်။ မိတ်ဆွေသစ်တွေလဲတိုးမဲ့အချိန်ပါ။ အောက်လက်ငယ်သားတွေရဲ့အထောက်အပံ့တွေ အများကြီး ရပါလိမ့်မယ်။ သားသမီးကြောင့်ဂုဏ်တတ် မျက်နှာကောင်းရပါလိမ့်မယ်။ စက်ပစ္စည်းတွေ ဝင်လာလိမ့်မယ်။ ကောင်းသောဝင်နေခြင်းပါ။ စက်ဝယ်ဖို့စိတ်ကူးရှိရင်လဲ ဒီကာလအတွင်းမှာ ဝယ်တာအကောင်းဆုံးပါ။ အလုပ်ထဲမှာ တစိမ်းလူမျိုးခြားတွေနဲ့ တွဲဖက်လုပ်ကိုင်ရတတ်ပါတယ်။ စီးပွားရေးကောင်းနေမယ်။ ကျန်းမာရေးကောင်းလာလိမ့်မယ်။ အချစ်ရေးမှာ စိတ်ညစ် စိတ်ဆင်းရဲပြီးမှ ပြေလည်မှု နားလည်မှုရလိမ့်မယ်။ ပညာရေးမှာ အနုစိပ်အသေးစိပ်သင်ခန်းစာတွေကို စိတ်ဝင်စားနေပါလိမ့်မယ်။
အထူးဟော… လာဘ် လာဘတွေဝင်မည်။
ယတြာ … ဇီးယိုကို အိမ်ကဘုရားမှာကပ်လှူပါ။
ဒီတစ်ပတ်ထဲ ငွေကြေးရလိုမှုကြောင့် လောဘတကြီး လုပ်နေရတာမျိုးတွေကို လျော့ချသင့်ပါတယ်။ အမှားတွေ့နိုင်လို့ပါပဲ။ မိသားစုအတွင်းရေးမှာ မကြေလည်စရာတွေများနေတတ်ပါတယ်။ အိမ်ထောင်ဘက်အချင်းချင်း စကားအခြေအတင်များနေရတတ်ပါတယ်။ အတူနေသူများနဲ့ စိတ်ဝမ်းကွဲတတ်တယ်။ အမွေကိစ္စ၊ မြေကိစ္စတွေနဲ့ ပက်သက်လာရင်သတိထားပြီးကိုင်တွယ်သင့်တဲ့ အချိန်ပါပဲ။ အိမ်မှာရှိသော စက်ပစ္စည်းတွေ ခဏခဏပျက်တတ်တယ်။ အောက်လက်ငယ်သားတော်လှန်တတ်တယ်။ အရာရာတိုင်းကိုအလောတကြီး မဆောင်ရွက်မိပါစေနဲ့။ အချစ်ရေးကံကောင်းနေပါတယ်။ ချစ်သူနဲ့ပျော်စရာကောင်းတဲ့ အချိန်တွေဖန်တီးနိုင်မှာပါ။ ဒီကာလအတွင်းပညာရေးညံ့နေပါလိမ့်မယ်။ စာမေးပွဲခန်းထဲရောက်မှ စာမေ့သွားတာမျိုးကြုံရတတ်ပါတယ်။
အထူးဟော … ကံညံ့နေတယ်။
ယတြာ … ကြွေပန်းကန်အကွဲအဟောင်းရှိရင် တစ်ချပ်ရှိရင် စွန့်ပစ်လိုက်ပါ။
ဒီကာလဟာစတင်အကောင်အထည်ဖော်လိုက်တဲ့ ကိစ္စရပ်တိုင်း ရေရှည်ကောင်းသွားတတ်ပါတယ်။ လုပ်ငန်းသစ် ဆိုင်သစ်ဖွင့်ခြင်း ၊ မင်္ဂလာပွဲကျင်းပခြင်း ၊ အိုးသစ်အိမ်သစ်ဆောက်ခြင်း စတဲ့ ကိစ္စရပ်တွေဟာအလွန်ကောင်းလာပါလိမ့်မယ်။ ခရီးကောင်းတွေသွားရတတ်သည်။ နိုင်ငံခြားနဲ့ဆက်စပ်သောကိစ္စ၊ ဆက်သွယ်ရေး၊ ကုန်သွယ်မှု၊ ဘုရားဖူးကားလိုင်း စတဲ့အလုပ်တွေအကျိုးဖြစ်ထွန်းပါလိမ့်မည်။ ရွှေဝင်တတ်သည်။ ဧည့်ကောင်း စောင်ကောင်းတွေ လာလည်တတ်သည်။ အချစ်ရေးကံကောင်းနေမည်။ ချစ်သူနဲ့ ပျော်စရာကောင်းတဲ့ ချစ်သူဘဝကို ဖြတ်သန်းနိုင်မည်။ ပညာရေးကံကောင်းနေမည်။ မိမိကြိုးစားလေ ထိပ်ဆုံးရောက်လေပါပဲ။ မိမိကျန်းမာရေးကောင်းနေမည်။မိခင်ကျန်းမာရေးကိုတော့ အထူးဂရုစိုက်ပါ။
အထူးဟော … အခုကောင်းမှ နောင်ကောင်းမည်။
ကံမြင့်နေပါပြီ။ အညံ့အဆိုးတွေတဖြည်းဖြည်း ပြေလွင့်သွားပါလိမ့်မယ်။ အထည်လုပ်ငန်း ၊ ဖက်ရှင်၊ အလှကုန်၊ အလှပြင်ဆိုင် စတဲ့အလုပ်တွေအကျိုးဖြစ်ထွန်းနေပါလိမ့်မယ်။ အလုပ်ထဲမှာ လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်တွေရဲ့ ထောက်ခံမှုကြောင့် လူကြီးမြှေက်စားခြင်းခံရမည်။ ကိုယ်ပိုင်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ တိုးတတ်မည်။ မိ်ိမိဆိုင် မိမိလုပ်ငန်းလူစည်မည်။ ဆွေမျိုးအသိုင်းအဝိုင်းထံမှ အကူအညီအထောက်အပံ့ရမည်။ ကျန်းမာရေးအနေနဲ့ ခေါင်းကိုက်တာ ၊ခေါင်းမူးတာ၊ သွေးတိုးတာမျိုးကြုံရတတ်သည်။ အချစ်ရေးကတော့ မကောင်းနိုင်သေးပါဘူး။ မိမိကိုယ်တိုင်ကလဲ အချစ်ထက်အရေးကြီးတာကို အချိန်ပေးမိနေတာကြောင့်ချစ်သူရဲ့ စိတ်ကောက်စိတ်ဆိုးခြင်းခံရမည်။ ပညာရေးကဏ္ဍအလွန် အားနည်းနေတဲ့ကာလပါပဲ။
ယတြာ … ဘုရားမှာ ရွှေသင်္ကန်းကပ်ပါ။
23.11.2017 မှ 29.11.2017 အထိ
မိမိကိုယျသာ အားကိုးသငျ့တဲ့ကာလပါ။ မိမိအတှေးအကွံမှတဈပါး တဈခွားလူဆီက အကွံဉာဏျမတောငျးပါနှငျ့။ ကူညီမဲ့သူထကျ ဒုက်ခပေးမဲ့သူသာ အနားမှာ ဝနျးရံနတေတျလို့ပါ။ မိမိစိတျကူးကွောငျ့ အောငျ
မွငျမှုတှေ ရပါလိမျ့မညျ။ ခရီးကိစ်စမြားကွနျ့ကွာပွီးမှ လိုရာပနျးတိုငျရောကျမညျ။ လကျရှိအလုပျမှာ စိတျပါဝငျစားမှုအားနညျးခွငျး၊ အလုကျထှကျခငျြစိတျဖွဈပျေါနတေတျခွငျးမြား ခံစားရမညျ။ အထကျလူကွီးနှငျ့အဆငျမပွဖွေဈတတျသညျ။ ဘာသာရေးအပျေါစိတျဝငျစားမှုအားနညျးနတေတျသညျ။နစေ့ဉျလုပျနကြေ ကုသိုလျအလုပျတှမေလုပျမိ ပငျြးရိနတေတျသညျ။ ပညာရေးကံအားနညျးနသေညျ။ စာတှမေလိုကျနိုငျတာမြိုးကွုံတှနေို့ငျသညျ။ အခဈြရေးကံကွမ်မာညံ့နတေုနျးပါပဲ ။ နှဈယောကျကွား သှေးတိုးစကားတှကေိုယုံမိတတျသညျ။
ယတွာ …တနင်ျဂနှထေောငျ့မှာ သပွပေနျးလှူပါ။
ငှကွေေးကဏ်ဍတဈခုကတော့ အားနညျးနသေညျ။ ငှပေေးငှယေူ သတိရှိပါ။ ကွှေးယူကွှေးတောငျးမလုပျပါနဲ့။ လူမှုရေးအသငျးအဖှဲ့မှငှမြေား မျိမိလကျဝယျထားရှိခွငျးမြိုးလကျမခံပါနှငျ့။ လာဘျပိတျတတျပါတယျ။ အစားအသောကျဆငျခွငျပါ။ ဝမျးပကျြဝမျးလြော ဖွဈတတျ့သညျ။ လုပျငနျးစီးပှားတိုးတတျနပေမေဲ့ လုပျသလောကျအကြိုးအမွတျနညျးနတေတျသညျ။ ကနျြးမာရေးကတော့ အထူးဂရုစိုကျစခေငျြသညျ။ အခဈြရေးကံကတော့ မွငျ့မားနခြေိနျပါပဲ။ ခဈြသူဆီက နားလညျမှုတှေ ကွငျနာမှုတှရေပါလိမျ့မညျ။ ပညာရေးကံမွငျ့နပေမေဲ့ မိမိအနနေဲ့ ကွိုးစားဖို့တော့ လိုပါသညျ။ အာရုံစိုကျထားမှ ပညာရပျအပျေါနားလညျလိမျ့မညျ။ ဇိမျခံပစ်စညျးမြား ဒီကာလအတှငျးမဝယျပါနဲ့။
အထူးဟော… လူပငျပနျးနှမျးခြိ နလေိမျ့မညျ။
ယတွာ… ရဟနျးတဈပါးအား ဖိနပျလှူပါ။
ကံမွငျ့မားနမေညျ။ အဘကျဘကျကအဆငျပွလေိမျ့မညျ။ အကြိုးဖွဈထှနျးသော ကောငျးသောခရီးတှသှေားရတတျသညျ။အလုပျစီးပှားတိုးတတျနလေိမျ့မယျ။ ဒါကွောငျ့ပဲကြှဲကူးရပေါဆိုသလို ငှကေံလဲမွငျ့မားနပေါလိမျ့မယျ။ ငှဝေငျသလောကျ ကုနျစရာတှကေလဲ မြားနတေတျပါတယျ။ လိုအပျမှငှသေုံးပါ။ အလုပျစီးပှားလုပျဖို့ ကမျးလှမျးတာမြိုးကွုံရရငျ လကျခံလိုကျပါလို့ပွောခငျြပါတယျ။ ထီဝါသနာပါသူဆို ထီထိုးဖို့အကောငျးဆုံးအခြိနျပါပဲ။ မိမိအိမျနဲ့ ဝေးတဲ့နရောက ထီဆိုငျမှာ ထိုးပါ။ မိမိရဲ့စိတျကူးစိတျသနျးတှလေဲ ကောငျးနတေတျပါတယျ။
ပညာရေးထကျ အခွားအရာတှကေိုစိတျဝငျစားနမေိတဲ့ အခြိနျပါ။ အခဈြရေးကံမကောငျးသေးပါ။ မိမိကိုယျတိုငျကလဲအခဈြရေးအပျေါစိတျဝငျစားမှု အားနညျးနပေါတယျ။
ယတွာ… အင်ျဂါထောငျ့မှာ ထီးနီ ၃ လကျလှူပါ။
မိတျဆှကေံအားကောငျးနတေဲ့ အခြိနျပါ။ မိမိကိုကူညီမဲ့သူတှေ ဝိုငျးရံနတေတျပါသညျ။ မိတျဆှသေဈတှလေဲတိုးမဲ့အခြိနျပါ။ အောကျလကျငယျသားတှရေဲ့အထောကျအပံ့တှေ အမြားကွီး ရပါလိမျ့မယျ။ သားသမီးကွောငျ့ဂုဏျတတျ မကျြနှာကောငျးရပါလိမျ့မယျ။ စကျပစ်စညျးတှေ ဝငျလာလိမျ့မယျ။ ကောငျးသောဝငျနခွေငျးပါ။ စကျဝယျဖို့စိတျကူးရှိရငျလဲ ဒီကာလအတှငျးမှာ ဝယျတာအကောငျးဆုံးပါ။ အလုပျထဲမှာ တစိမျးလူမြိုးခွားတှနေဲ့ တှဲဖကျလုပျကိုငျရတတျပါတယျ။ စီးပှားရေးကောငျးနမေယျ။ ကနျြးမာရေးကောငျးလာလိမျ့မယျ။ အခဈြရေးမှာ စိတျညဈ စိတျဆငျးရဲပွီးမှ ပွလေညျမှု နားလညျမှုရလိမျ့မယျ။ ပညာရေးမှာ အနုစိပျအသေးစိပျသငျခနျးစာတှကေို စိတျဝငျစားနပေါလိမျ့မယျ။
အထူးဟော… လာဘျ လာဘတှဝေငျမညျ။
ယတွာ … ဇီးယိုကို အိမျကဘုရားမှာကပျလှူပါ။
ဒီတဈပတျထဲ ငှကွေေးရလိုမှုကွောငျ့ လောဘတကွီး လုပျနရေတာမြိုးတှကေို လြော့ခသြငျ့ပါတယျ။ အမှားတှနေို့ငျလို့ပါပဲ။ မိသားစုအတှငျးရေးမှာ မကွလေညျစရာတှမြေားနတေတျပါတယျ။ အိမျထောငျဘကျအခငျြးခငျြး စကားအခွအေတငျမြားနရေတတျပါတယျ။ အတူနသေူမြားနဲ့ စိတျဝမျးကှဲတတျတယျ။ အမှကေိစ်စ၊ မွကေိစ်စတှနေဲ့ ပကျသကျလာရငျသတိထားပွီးကိုငျတှယျသငျ့တဲ့ အခြိနျပါပဲ။ အိမျမှာရှိသော စကျပစ်စညျးတှေ ခဏခဏပကျြတတျတယျ။ အောကျလကျငယျသားတျောလှနျတတျတယျ။ အရာရာတိုငျးကိုအလောတကွီး မဆောငျရှကျမိပါစနေဲ့။ အခဈြရေးကံကောငျးနပေါတယျ။ ခဈြသူနဲ့ပြျောစရာကောငျးတဲ့ အခြိနျတှဖေနျတီးနိုငျမှာပါ။ ဒီကာလအတှငျးပညာရေးညံ့နပေါလိမျ့မယျ။ စာမေးပှဲခနျးထဲရောကျမှ စာမသှေ့ားတာမြိုးကွုံရတတျပါတယျ။
အထူးဟော … ကံညံ့နတေယျ။
ယတွာ … ကွှပေနျးကနျအကှဲအဟောငျးရှိရငျ တဈခပျြရှိရငျ စှနျ့ပဈလိုကျပါ။
ဒီကာလဟာစတငျအကောငျအထညျဖျောလိုကျတဲ့ ကိစ်စရပျတိုငျး ရရှေညျကောငျးသှားတတျပါတယျ။ လုပျငနျးသဈ ဆိုငျသဈဖှငျ့ခွငျး ၊ မင်ျဂလာပှဲကငျြးပခွငျး ၊ အိုးသဈအိမျသဈဆောကျခွငျး စတဲ့ ကိစ်စရပျတှဟောအလှနျကောငျးလာပါလိမျ့မယျ။ ခရီးကောငျးတှသှေားရတတျသညျ။ နိုငျငံခွားနဲ့ဆကျစပျသောကိစ်စ၊ ဆကျသှယျရေး၊ ကုနျသှယျမှု၊ ဘုရားဖူးကားလိုငျး စတဲ့အလုပျတှအေကြိုးဖွဈထှနျးပါလိမျ့မညျ။ ရှဝေငျတတျသညျ။ ဧညျ့ကောငျး စောငျကောငျးတှေ လာလညျတတျသညျ။ အခဈြရေးကံကောငျးနမေညျ။ ခဈြသူနဲ့ ပြျောစရာကောငျးတဲ့ ခဈြသူဘဝကို ဖွတျသနျးနိုငျမညျ။ ပညာရေးကံကောငျးနမေညျ။ မိမိကွိုးစားလေ ထိပျဆုံးရောကျလပေါပဲ။ မိမိကနျြးမာရေးကောငျးနမေညျ။မိခငျကနျြးမာရေးကိုတော့ အထူးဂရုစိုကျပါ။
အထူးဟော … အခုကောငျးမှ နောငျကောငျးမညျ။
ကံမွငျ့နပေါပွီ။ အညံ့အဆိုးတှတေဖွညျးဖွညျး ပွလှေငျ့သှားပါလိမျ့မယျ။ အထညျလုပျငနျး ၊ ဖကျရှငျ၊ အလှကုနျ၊ အလှပွငျဆိုငျ စတဲ့အလုပျတှအေကြိုးဖွဈထှနျးနပေါလိမျ့မယျ။ အလုပျထဲမှာ လုပျဖျောကိုငျဖကျတှရေဲ့ ထောကျခံမှုကွောငျ့ လူကွီးမွှကျေစားခွငျးခံရမညျ။ ကိုယျပိုငျစီးပှားရေးလုပျငနျးမြား တိုးတတျမညျ။ မျိမိဆိုငျ မိမိလုပျငနျးလူစညျမညျ။ ဆှမြေိုးအသိုငျးအဝိုငျးထံမှ အကူအညီအထောကျအပံ့ရမညျ။ ကနျြးမာရေးအနနေဲ့ ခေါငျးကိုကျတာ ၊ခေါငျးမူးတာ၊ သှေးတိုးတာမြိုးကွုံရတတျသညျ။ အခဈြရေးကတော့ မကောငျးနိုငျသေးပါဘူး။ မိမိကိုယျတိုငျကလဲ အခဈြထကျအရေးကွီးတာကို အခြိနျပေးမိနတောကွောငျ့ခဈြသူရဲ့ စိတျကောကျစိတျဆိုးခွငျးခံရမညျ။ ပညာရေးကဏ်ဍအလှနျ အားနညျးနတေဲ့ကာလပါပဲ။
ယတွာ … ဘုရားမှာ ရှသေင်ျကနျးကပျပါ။
ဆရာဟိန်းရဲ့( ၁၉.၁၁.၁၇ မှ ၂၅.၁၁.၁၇)ဟောစတမ်း
(၂၀.၁၁.၁၇ မှ ၂၆.၁၁.၁၇) ဟောစတမ်း